UbuntuGuideBurmese - Ubuntu Wiki
Describe UbuntuGuideBurmese here.
* Ubuntu လမ်းညွှန်သည် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာကုမ္ပဏီနှင့်သော်လည်းကောင်း အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများနှင့်သော် လည်းကောင်း စီးပွားရေးအရသက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
* Ubuntu သည် သုံးစွဲသူတွေကို Menu အသုံးချရုပ်ပုံဆိုင်ရာ [http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface Graphical User Interface (GUI)] နှင့် သော်လည်းကောင်း စာသားအသုံးချ command line ဆိုင်ရာ text-based [http://en.wikipedia.org/wiki/Command-line_interface command-line interface (CLI)] သော်လည်းကောင်း အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ Ubuntu မှာ (command-line-interface)ကို Terminal လို့ခေါ်ပါသည်။ Terminal ကိုစဖွင့်မယ်ဆိုရင် :Menu -> File -> Open Terminal ခုလို အဆင့်တိုင်းသွားရောက်နိုင်ပါသည်။ ခဲရောင်မျဉ်း အစက်များအတွင်းမှာ စာသားများကို Terminal မှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်မှုစနစ်မှ ပြောင်းလဲချက်များကို ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသူ (admin အခွင့်ရှိတဲ့) အသုံးပြုသူကပဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ 'sudo' command က အသုံးပြုသူကို ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသူ admin အဖြစ် ယာယီသတ်မှတ်ပေးသည်။ (ဥပမာ ပရိုဂရမ်တစ်ခု သွင်းစဉ်(သို့) စနစ်ပိုင်းဆိုင် ရာပြောင်းလဲစဉ်)နမူနာအနေဖြင့် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
'gksudo'ကို Graphical Application တွေဖွင့်ရာမှာ 'sudo' အစား Run Command မှလည်းကောင်း(သို့) menu bar မှလည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နမူနာအနေဖြင့် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
gksudo gedit / etc / apt / sources. list
ဖိုင်အများစုရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို source ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတဲ့ admin အခွင့် (root Administrative privileges)နှင့် Nautilus file managerကဲ့သို့ အသုံးပြုကာနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ menu barမှတဆင့် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ' gksudo ' ကိုအသုံးပြုပါ။
gksudo nautilus သို့မဟုတ် sudo nautilus
man ကတော့ ကွန်မန်း command တွေအတွက် အကူအညီလိုလာပြီဆိုရင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နမူနာအနေနဲ့ man sudo လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် sudo ကွန်မန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ လက်စွဲဖိုင်စာမျက်နှာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
apt-get နှင့် aptitude တွေကို ပရိုဂရမ်တွေ ပက်ကေ့ (package) တွေ ထည့်သွင်းရာမှာအမြန်ဆုံးနည်းအနေနဲ့ အသုံးပြုပါသည်။ GUI ထည့်သွင်းမှုအတွက် Synaptic Package Manager ကိုလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ပရိုဂရမ်တွေ ပက်ကေ့ (package) အများစုဟာ apt-get install နှင့်ရော Synaptic Package Manager နှင့်ပါ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အခုလမ်းညွှန်မှာမြင်တွေ့နိုင် ပါသည်။
Synaptic မှာပက်ကေ့တွေ (package) ကိုရှာဖွေပုံနဲ့ ထည့်သွင်းပုံက ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။ အမိန့်ပေးမှုအများအပြားကို Nano text editor စာသား အယ်ဒီတာ အသုံးပြုခိုင်းစေပါသည်။ Nano text editor က Linux လင်းနက်တိုင်းမှာ ရရှိတဲ့ text editor အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတရံမှာ Ubuntuဦးဘွန်တု မှာပါတဲ့ gedit text editor ထက် အသုံးပြုရတာ ပိုလွယ်ပါသည်။ Menu ဆိုတာကတော့ desktop အပေါ်ဘက်မှာရှိ Menu barမီနူးဘားကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးမှာရှိတဲ့ Start menu ၊ Apple Macintosh မှာရှိတဲ့ Menu bar တွေနဲ့တူတူပါပဲ။ တကယ်လို့ (64 Bits) ၆၄ ဘစ် ဗားရှင်းစနစ်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် i386 ကို amd64 နဲ့ အစားထိုးရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
How to find out which version of Ubuntu you 're using
Terminal ပေါ်မှာ ဒီလိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။
How to find out which kernel you are using
Ubuntu ကို ၆လလျှင်တစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေပြီး နှစ်စဉ် ဧပြီလနှင့်အောက်တိုဘာလတို့တွင် ထုတ်ဝေပါသည်။ Version တစ်ခု မထုတ်ဝေမှီ beta ( ၂ ) ကြိမ် ၊ Alpha ( ၂ ) ကြိမ် ကိုလည်း developer များအနေဖြင့် စမ်းသပ် သုံးစွဲ အကြံပြုနိုင်ရန်အတွက် ထုတ်ပေးပါသည် ။
version (၅) ကြိမ်ပြည့်တိုင်း (သို့ ) ၂ နှစ်တစ်ကြိမ် LTS version ( Long Term Support ) ကိုထုတ်ပေးပါသည် ။ LTS version သည် လုံခြုံရေး update ၅နှစ်အထိအထောက်အပံ့ပေးပါသည် ။
Older Versions of Ubuntu Older Versions of Ubuntu Saucy Salamander (13.10)(no longer supported) Raring Ringtail (13.04)(no longer supported) Quantal Quetzal (12.10)(no longer supported) Precise Pangolin (12.04 LTS)(Long Term Support version supported until April 2017) Lucid Lynx (10.04 LTS)(Server support (only) until April 2015) See this complete listof older and newer versions.
Ubuntu Forums (http://ubuntuforums.org/) တွင် အွန်လိုင်းဖြေရှင်းချက်များနှင့်အခြားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကူညီပေးရန် အဖွဲ့အစည်းများစွာ ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် Ubuntu for Myanmar (u4mm) (http://u4mm.com/) ရှိပြီး မြန်မာဘာသာဖြင့် Ubuntu အကြောင်းလေ့လာနိုင်ပါမည်။
Unity (http://en.wikipedia.org/wiki/Unity_%28desktop_environment%29) ဆိုသည်မှာ Ubuntu တွင် အသုံးပြုသည့် နဂိုမူလပါသော Desktop ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ (Gnome) ဂနုမ်းမှ အသုံးပြုသည့် GTK ပလက်ဖောင်းဖြင့် အဆင်ပြေသင့်တော်ပါသည်။ netbook များတွင် အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်း အခြားသော စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများတွင်ပါ အသုံးဝင်စေရန် canonical မှ ပြင်ဆင်ပေးထားပါသည်။
Gnome3(http://www.gnome.org/) သည် Ubuntu အတွက် ပုံစံအသစ်အနေဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ Gnome လုပ်ငန်းစဉ်များ (http://projects.gnome.org/) ကြည့်ရှု ရယူနိုင်ပါသည်။
Gnome installation ပြုလုပ်ပုံ ၁ (https://launchpad.net/~gnome3-team/+archive/gnome3) :
sudo add-apt-repository ppa : gnome3-team/gnome3sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade sudo apt-get install gnome-shell
installation ပြုလုပ်ပုံ ၂ (https://launchpad.net/~ubuntugnometeam) :
sudo add-apt-repository ppa : ubuntugonmeteam/gnome3 sudo add-apt-repository ppa : ubuntugonmeteam/ppa-gen sudo apt-get update sudo apt-get install ugr-desktop-g3 sudo apt-get dist-upgrade
Ubuntu Screenshots and Screenshots
What is Ubuntu? (http://www.ubuntu.com/ubuntu) Ubuntu 11.04 Unity Desktop (http://www.youtube.com/watch/v=HMztaKt_1_E) and other YouTube videos (http://www.youtube.com/results?search-query=ubuntu+11.04aq=f). မကြာမီ မြန်မာဘာသာ သင်ကြားပို့ချချက်များ ထည့်သွင်းမည်။
News Application Resources
GetDeb (http://www.getdeb.net)- နောက်ဆုံးထွက်ရှိသော software များကို တရားဝင်ထိန်းသိမ်းထားရာ နေရာများကဲ့သို့ ရရှိနိုင်ခြင်း(သို့) မရရှိနိုင်ခြင်း အတူတူဖြစ်သည်။ .deb ဖိုင်ပုံစံဖြင့် ထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူပါသည်။ (ဤနေရာတွင် ဆက်လက်လေ့လာပါ။ Apt and Package Basics).
Linux Alternatives (http://www.linuxalt.com/) See our full list of add-on applications.
Kubuntuguide (http://www.kubuntuguide.info)--Kubuntu သည် နာမည်ကျော်ကြားသော KDE desktop ကို အသုံးပြုထားပါသည်။
Xubuntu (http://www.xubuntuguide.org)--Xubuntu can run with as little as 256 Mb RAM. It is better for older machines with limited resources.---
Lubuntu (https://wiki.ubuntu.com/Lubuntu)--သည် RAM 256Mb နှင့်ပင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အိုဟောင်းနေသော စက်များနှင့်ပင် သင့်တော်ပါသည်။
Offical Ubuntu Server Guide (https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/index.html) -- Ubuntu server လမ်းညွှန် - server packages များအတွက် ကောင်းမွန်သော ကိုးကားမှုဖြစ်ပါသည်။
Ubuntu Doctors Guide (http://www.ubuntudoctorsguild.org/) -- ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာများတွင်သုံးသော (K)ubuntu Linux များအတွက်စုစည်းထားသောလမ်းညွှန်ချက်များ
SkoleLinux (http://www.slx.no/en/take-a-tour) -- Debian/Ubuntu Linux (open-source) များအတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာများ စုစည်းထားမှု
Ubuntu ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များ
Ubuntu Saucy Salamander သည် 384 Mb ပမာဏသည် RAM ရှိရုံမျှဖြင့် ကောင်းစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ (GUI installer ဖြင့်ထည့်သွင်းလျှင် အနည်းဆုံး 256 Mb ပမာဏလိုအပ်ပြီး၊စာသားဖြင့်သာဖော်ပြသော installer ကို သုံးလျှင် 192 Mb ပမာဏသာလိုအပ်သည်)။ Notebooks များတွင် Ubuntu Saucy Salamander ကိုကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Ubuntu ထည့်သွင်းခြင်းသည် Hard disk နေရာလွတ် 3-4 GB မျှသာ အသုံးပြုပြီး အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် 8-10GB သာ လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ memory ပမာဏသည် ယခုဖော်ပြခဲ့သည်ထက် နည်းပါးနေပါက အခြားသော ဆင်တူ OS များဖြစ်သော အောက်ပါ OS များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ [https://wiki.ubuntu.com/Lubuntu Lubuntu] (၁၆၀ MB RAM ပမာဏရှိရုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။)[http://www.puppylinux.org/ PuppyLinux] (၂၅၆ MB RAM ပမာဏရှိရုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။)သို့မဟုတ် [http://damnsmalllinux.org/ DSL] (အနည်းဆုံး RAM ပမာဏ၊Harddisk နေရာလွတ် အနည်းငယ်သာရှိရုံ USB drive မှ အသုံးပြုရန်၊ သို့မဟုတ် အခြား Operation System များ အတွင်းမှ softwareတစ်ခုကဲ့သို့ အသုံးပြုရန်)။
Ubuntu တစ်ခုတည်း သီးသန့်ထည့်သွင်းခြင်း
(http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download)မှ Ubuntu ၏ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသော operating system_OS အား download ဆွဲယူပါ။
ထို OS အား CD ပေါ်သို့ Ubuntu installation CD ( Live CD ) အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် မည်သို့ရေးသားရမည်ကို How To (https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto) တွင် လမ်းညွှန်ထားသည်။ ထိုလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ပြုလုပ်ထားသည့် Live CD ကို Ubuntu ထည့်သွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် Server version ကို အရင်ထည့်သွင်းပြီးမှ Ubuntu desktop version ကို ထည့်သွင်း၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Server version ကဲ့သို့ ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် စာသားဖြင့်သာဖော်ပြသော installer ကို အသုံးပြုထားသည့် ISO file ကို Alternative Download (http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download) တွင် ရယူနိုင်သည်။ ထို ISO င်Desktop CD(Regular Download) ထက်ရွေးချယ်နိုင်သော installation လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုပါဝင်သည်။ LiveCD ကို USB flashdrive ပေါ်သို့ (usb-creater-gtk) အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းပြီး ထို flashdrive ကို CD drive မပါဝင်သည့် ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် Ubuntu ထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Windows နှင့် Ubuntu ကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲပေါ်တွင် ယှဉ်တွဲတင်ခြင်း
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲပေါ်တွင် Windows နှင့် Ubuntu ယှဉ်တွဲတင်ရာတွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ Windows ၏ boot loader သည် Windows သီးသန့်ကိုသာ ထောက်ပံ့သည့်အတွက် ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Windowsကိုဦးစွာထည့်သွင်းရပါမည်။ ပုံမှန် Windows ထည့်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် Hard drive ၏ နေရာရှိသမျှကို အသုံးပြုသည့်အတွက် Ubuntu ထည့်သွင်းရန် နေရာလွတ်ရရှိရန်ဆိုပါက Windows မှ အသုံးပြုထားသည့် Hard drive ကိုချုံ့ပေးရန်အပ်ပါသည်။[ Harddriveပမာဏကိုမပြောင်း လဲခင် ဦးစွာ ( Disk Cleaup ) မလိုအပ်သော ဖိုင်များကို ရှင်းလင်း၍ ( Disk Defragmentation ) ဖိုင်ပြန်စီသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ထားပါ။]
Windows ၏ Hard drive partition ကိုချုံ့ပြီးပါက Ubuntu ကို ထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Hard disk partition များကို ထပ်မံပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် ကွန်ပျူတာကို reboot ပြန်လုပ်ပေးရပါမည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Windows စနစ်မှ အ သစ်ပြုပြင်လုပ်ဆောင်ထားသော Hard drive ကို သိရှိစေပြီး ( Windows XP တွင် chkdsk ကိုအသုံးပြုပြီး နောက်ပိုင်းထွက်ရှိ လာသော Windows စနစ်များတွင် အခြားသော Hard drive ကိုစစ်ဆေးသည့် utilities များကို အသုံးပြုသည်။) ထို့အပြင် bootup ဖိုင်များကို ပြောင်းလဲရေးသားစေသည်။ (ထိုကဲ့သို့ reboot မပြုလုပ်ခဲ့ပါက Windows အသုံးပြုသော Hard drive partition ၏ bootup ဖိုင်များကို Windows Recovery Console အသုံးပြု၍ ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Windows စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းနည်းသစ်များတွင် Hard drive primary partition ၂ခုအသုံးပြုသည် (Windows စနစ်စတင်ရန် partition အသေး၁ခုနှင့် Windows စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက် partition အကြီးတစ်ခု) ၊Ubuntu Linux စနစ်ထည့်သွင်းရာတွင် လည်း Hard drive partition ၂ခုလိုအပ်ပါသည် -- ( Linux swap partition နှင့် စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက် partition)။ Linux အတွက် Hard drive partition များခွဲရာတွင် primary partition သို့မဟုတ် primary partition ပေါ်မှ ပြန်ခွဲဝေထားသော logical partition ၂ခု အသုံးပြုရမည်။ အချို့ ကွန်ပျူတာ ရောင်းချသူများသည် Hard drive ၏ primary partition ခုလုံးကို အသုံးပြုထား တတ်သည့်အတွက် Ubuntu ထည့်သွင်းရန်အတွက် partition နေရာလွတ်မရှိကြောင်းဖော်ပြနေတတ်သည်။ Hard drive ၏ primary partition ၁ခုရှိလျှင် ထို primary partition ပေါ်တွင် logical partition များထပ်မံခွဲ၍ Ubuntu ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ( Ubuntu အတွက် primary partition ဖြစ်စေ logical partition ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်သည်။)
အကယ်၍ Hard drive ပေါ်တွင် primary partition ၂ခုသာရှိပါက (ထို၂ခုတွင် နေရာလွတ်များစွာရှိနေလျှင်)Ubuntu ကို ဒုတိယ operation system အဖြစ်ထည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲရှိမည်မဟုတ်ပါ။ Ubuntu Live CD ကို " largest available free space" တွင် ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုလိုက်ရုံဖြင့် အလိုအလျှောက် ပြုလုပ်သွားနိုင်သည်။ အခြား Partition ၁ခုတွင် နေရာလွတ် အများ အပြားရှိနေပါက Ubuntu Live CD သည် Ubuntu ကို " largest available free space" တွင် ထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
မူလ Windows စနစ်၏ partition သည် အနည်းဆုံး 20GB (Vista နှင့် Windows7ဆိုလျှင် 30GB)ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး Ubuntu အတွက် partition သည် အနည်းဆုံး 10GB (20GB ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါသည်။) ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင် Hard drive နေရာလွတ်များစွာရှိနေလျှင် သင်ကြိုက်သည့် operation system ကို နေရာကြိုက်သလောက် ပိုပေးနိုင်ပါသည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် သင့်ကွန်ပျူတာတွင် Ubuntu ကို အရင်ထည့်သွင်းပြီးမှ GParted ဖြင့် primary NTFS partition တစ်ခု ဖန်တီး၍ Windows စနစ်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ( GParted ကို Live CD / USB တစ်ခုမှနေ၍ အသုံးပြုရပါမည်။) ထို primary NTFS partition ကိုဖန်တီးပြီးပါက သင်၏ Windows CD/DVD မှ boot လုပ်၍ Windows စနစ်ကိုထို NTFS partition တွင်ထည့်သွင်းရန် ရွေးချယ်ရမည်။ ထည့်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးပါက ကွန်ပျူတာပုံမှန် အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် reboot ပြန်လုပ်ပါ။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံး ပြီးဆုံးသွားလျှင် Ubuntu LiveCD/USB ကိုသုံး၍ GRUBကို MBR တွင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Windows သည် MBR ကိုပြုပြင်၍ သူ၏ကိုယ်ပိုင် boot loader ကို master boot loader အဖြစ် ပြောင်းလဲသွား၍ဖြစ်ပါသည်။) GRUB ကိုထည့်သွင်းပြီးပါက သင်နှစ်သက်ရာ OS ဖြင့် boot လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားသော Windows နှင့် Ubuntu ယှဉ်တွဲ ထည့်သွင်းခြင်း နည်းလမ်းများ
Wubi (http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-wubi) (Windows-based Ubuntu Installer), Ubuntu ကို Windows စနစ်ပေါ်တွင် Hard drive အတုတစ်ခုဖန်တီး၍ အသုံးပြုနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသော dual-boot installer ၁ခုဖြစ်သည် (သို့သော်Ubuntu ၏စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။ Windows စနစ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုရသည့်အတွက် ဤနည်းလမ်းကို Ubuntu ကို ယာယီ အသုံးပြုရန်အတွက်သာ သုံးရန်သင့်တော်ပါသည်။ Ubuntuကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုမည်ဆိုပါက သီးသန့် partition, သီးသန်ု့ file system ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းသာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။
Easy BCD (http://neosmart.net/dl.php?id=1),Windows စနစ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုရသည့် အခမဲ့ Program တစ်ခုဖြစ်သည်။ Windows 7/Vista ၏ boot loader ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် Windows7/ Vista နှင့် Ubuntu (တခြား operation systems များအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။) ကွန်ပျူတာ ၁လုံးတည်းပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်စေသည်။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းပေါ်တွင် Operation System OSများ ၁ခုထက်ပို၍ အသုံးပြုခြင်း
သတိပြုရန်: Ubuntu ထည့်သွင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရွေးချယ်စရာအဆင့်တစ်ခုရှိပါသည် (Ready to install > Advanced)။ ၎င်းမှာ GRUBF2 bootloader ကို MBR (Master BootRecord)အားပြောင်းလဲခြင်းမပြုလုပ်ပဲ(K)UbuntuOSထည့်သွင်းထားသော Harddisk Partition အတွင်း ထည့်သွင်းရန် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် အထူး သတိပြုရန်လိုအပ် သော အချက်မှာ သင်၏ ကွန်ပျူတာစနစ်တွင် boot လုပ်ရန်အတွက် သီးခြား Hard disk Partition တစ်ခု(သို့) Operation System ၂ခုထပ်ပို၍ အသုံးပြုထားခြင်း (သို့) chainloads bootloaders များ အသုံးပြုထားခြင်းရှိမရှိပင် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောစနစ်များတွင် MBR ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမလုပ်သည်မှာ အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ: : Desktop version GUI installer ကိုအသုံးပြု၍installationပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းအဆင့်တစ်ခုတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
Summary > Advanced > Device for boot loader installation: /dev/sda6
အထက်ပါ ဥပမာတွင် ထိုအခြေအနေအတိုင်း ထားရှိပါက GRUB2 bootloader သည် /dev/sda6 ((K)UbuntuOS ထည့်သွင်းထားသည့် Harddisk Partition ) အတွင်းသို့သာ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး MBR (Master Boot Record) ကိုပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် /dev/sda ၏ default setting တွင်ထားရှိလိုက်ပါက GRUB2 သည် /dev/sda6(K)Ubuntu OS ထည့်သွင်းထားသည့် Harddisk Partition ) အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားမည် ဖြစ်သည့်အပြင် MBR (Master Boot Record) ကိုလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားပါမည်။ ထိုအခါ GRUB2 သည် ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် Operation System အားလုံး၏ master bootloader အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသော bootloader (GRUB2 မဟုတ်သည့်) များကိုအ သုံးပြုနေသူဖြစ်လျှင် ထိုအခြေအနေသည် အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။
Start Manager ကို အသုံးပြု၍ Grub ၏ setting များကို ပြောင်းလဲခြင်း
Grub သည် (Operation System ၁ခုထပ်ပို၍ ထည့်သွင်းထားသော ကွန်ပျူတာများတွင်) မည်သည့် OS ကို ပုံမှန် ဦးစားပေး အနေဖြင့် စတင်လည်ပတ်စေမည်ကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခြားသော bootup setting များကို ထိန်းချုပ်သည့် bootup utility ၁ခုဖြစ်သည်။ Startup Manager (http://sourceforge.net/projects/startup-manager/) ကို အသုံးပြု၍ Grub ၏ setting များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Startup Manager သည် Grub (Grub Legacy ), Grub 2, Usplash, and Splashy စသည့် bootloader များ၏ setting များကို ကွပ်ကဲရာတွင်အသုံးပြုသည့် software ဖြစ်သည်။ Startup Manager အသုံးပြုပုံကို [(https://help.ubuntu.com/community/StartUpManager Startup Manager Help)] တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Startup Manager ထည့်သွင်းရန်အတွက်
Startup Manager လည်ပတ်စေရန်
Menu > System > Administration > Startup Manasger
မှတ်ချက်။ ။ Grub setting များကို command-line interface မှလည်း ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်သည်။
Mac OS X နှင့် Ubuntu ကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းပေါ်တွင် ယှဉ်တွဲတင်ခြင်း
Mac OS X သည် Linux နှင့် တည်ဆောက်ပုံ ဆင်တူသည် (Max OS X သည် BSD Unix ကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။) Mac OS X နှင့် Ubuntu ကို ယှဉ်တွဲတင်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သောအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များကို (http://help.ubuntu.com/community/MacBook ) တွင်လေ့လာနိုင်သည်။
Ubuntu ရှိပြီးသား ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Mac OS X တင်ခြင်း
Ubuntu ကို Mac OS X နှင့် ယှဉ်တွဲတင်မည်ဆိုပါက Ubuntu ကို ထည့်သွင်းမည့် Harddisk Partition ကို ext4 ကို ရွေးချယ်ပါ။ (ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် Super Grub Disk CD သည် အသုံးဝင်သော utility ဖြစ်သည်။) Super Grub ISO ဖိုင်ကို forjamari.linex.org (http://supergrub.forjamari.linex.org) တွင် download ရယူနိုင်သည်။
Ubuntu ကို ထည့်သွင်းပြီးပါက Grub start-up list ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပါ။ sudo nano /boot/ grub/menu.1st ထို့နောက် အောက်ပါစာကြောင်းများကို ထပ်ပေါင်းထည့်ပါ။ title Mac OS X root (hd0,0) makeactive chainloader + 1 ပြီးလျှင် Mac ကို reboot လုပ်၍ Mac OS X တွင်ပါဝင်သော Terminal ကို သွားပါ။ (boot လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါက Mac OS X DVD ကိုအသုံးပြု၍ boot လုပ်ပါ။) F8 ကိုနှိပ်၍ -s ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ရိုက်ထည့်ရမည့်စာကြောင်းများမှာ fdiskn -e /dev/rdisk0 flag2(flag 2သည် ယခုဥပမာ၏ Harddisk Partition number2ဖြစ်သည်။ သင်၏ Mac တွင် အသုံးပြုထားသည့် Partition number ပေါ်တွင် လိုက်၍ပြောင်းလဲနိုင်သည်။) quit y reboot ပုံမှန်အလုပ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဟု မသေချာသေးပါက Super Grub Disk CD ကို အသုံးပြု၍ Grub ကို active လုပ်ပါ။
Installing Ubuntu after Mac 0S X
Mac OS X ရှိပြီးသား ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Ubuntu တင်ခြင်း
Boot လုပ်နေစဉ်အတွင်း bootloader တွင် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိဟု သတင်းပို့ချက် (ဥပမာ HFS+error) များပေါ်လာပါက Super Grub ကိုအသုံးပြု၍ Linux GRUB နှင့် MBR (Master Boot Record) ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Ubuntu ကို ထည့်သွင်းပြီးပါက Grub start-up list ကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပါ။ sudo nano /boot/grub/menu.lst ထို့နောက် ထပ်ပေါင်းထည့်ရမည့် စာကြောင်းများမှာ
title Mac OS X root (hd0,0) makeactive chainloader +1
အကယ်၍ သင်သည်GRUB တွင် Mac OS X သို့မဟုတ် Windows နှင့်ပတ်သတ်၍ အခက်အခဲဖြစ်နေပါက Mac OS X ၏ Grub ရှိ entry ကို "root (hd0,1) သို့ပြောင်းလဲပါ။ ထိုသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သင်၏ကွန်ပျူတာသည် Partition number 1 ကို boot လုပ်ပါလိမ့်မည်။ Grub မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်အထိ partition number ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Package Installation and Updates Apt and Package Basics Add Extra Repositories ကိုဖတ်ပါ။ Ubuntu အသုံးပြုသူအများစုသည် Synaptic Package Manager ကို package များထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုကြပါသည်။ အောက်ပါ ညွှန်ပြချက်များသည် package များကို package များထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုကြပါသည်။ အောက်ပါညွှန်ပြချက်များသည် package များကို command-line Terminal အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းရန် နည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ Terminal ကိုစတင်ရန် : Menu -> Application -> Accessories -> Terminal
packages များထည့်သွင်းရန် :
sudo apt-get install *packagename* ဥပမာ : sudo apt-get install mpdsbackup
package များ ဖယ်ရှားရန် :
sudo apt-get remove *packagename*
package နှင့်တကွ ထို package နှင့် သက်ဆိုင်သည်များအားလုံး ဖယ်ရှားရန် :
sudo apt-get autoremove ဥပမာ : sudo apt-get remove mpd sbackup
package များရှာဖွေရန် :
apt-cache search < keywords> .ဥပမာ : apt-cache search Music MP3 apt-cache search "Text Editor"
addting/removing repositories ပြုလုပ်ပြီး package ၏ database များကို ပြန်လည်မွမ်းမံရန် :
package များကို upgrade လုပ်ရန် :
Ubuntu စနစ်တစ်ခုလုံးကို upgrade လုပ်ရန် ( ဥပမာ - Raring မှ Saucy)
deb package များထည့်သွင်းခြင်း
Debian (.deb) package များသည် (Windows ပေါ်တွင်installer .exe .msi package များ အလုပ်လုပ်သကဲ့သို့) Ubuntu ပေါ်တွင် အသုံးပြုသော package များဖြစ်သည်။ Ubuntu စနစ်ပေါ်တွင် မည်သည့် .deb package ကိုမဆို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Ubuntu စနစ်တွင် မူလပါရှိသော installer နှင့် .deb package များကို ဆက်သွယ်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသဖြင့် .deb ဖိုင်များကို file manager (Nautilus) တွင် click ခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ညွှန်ပြချက်များမှာ command-line terminal (Terminal) ကို အသုံးပြု၍ package များ ထည့်သွင်းချင်သူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်မှ ဆွဲယူထားသော Debian (Ubuntu) package (.deb) ၁ခု ထည့်သွင်းရန် :
Debian (Ubuntu) package (.deb) ကိုဖယ်ရှားရန် :
sudo dpkg -r packagename . ဥပမာ : sudo dpkg-reconfigure mpd
(Tar/Gzip) ရဲ့ extension က .tar.gz ဖြစ်ပါသည်။ (Tar/Bzip2) ရဲ့ extension က .tar.bz2 ဖြစ်ပါသည်။ Terminal မှ အသုံးပြုနည်းများကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
tar xvf packagename . tar . gz
-x ဖြေရန် -v ပြသရန် (ဖိုင်အရေအတွက် ဖိုင်အမည် စသည်ဖြင့်) -f ဖိုင်အဖြစ်
gunzip filename .gz
.gz အဖြစ် နှစ်သက်ရာဖိုင်ကို compress လုပ်ခြင်း
tar cvfs packagename .tar.gz folder
.bz2 ကိုဖြည်ခြင်း ***
.bz2 အဖြစ် နှစ်သက်ရာဖိုင်ကို compress လုပ်ခြင်း
*** you can contribute
Aptitude သည် terminal-based package manager ဖြစ်ပါသည်။apt-get အနေဖြင့် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည် ။ Aptitude ဖြင့်ထည့်သွင်းသော package များသည် အများအားဖြင့် package dependencies များအားအလိုအလျောက် ထည့်သွင်းခြင်း ၊ပြန်ထုတ်ခြင်း (install / remove )တို့ကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည် ။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လွယ်ကူစွာဖြင့် application ကို remove ပြန်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ Aptitude ကိုသုံးစွဲရန် command line တွင် aptitude နေရာတွင် apt-get ဖြင့်အစားထိုးရပါမည်။
ဥပမာ ။ sudo aptitude install packagename
sudo aptitude remove packagename sudo aptitude update sudo aptitude upgrade
အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို လေ့လာလိုပါက aptitude documentationကိုအောက်ပါလင့်ခ်တွင်လေ့လာပါ၊ (http://people.debian.org/~dburrows/aptitude-doc/en/) .
apt-get and aptitude တို့သည် programs/ packages များထည့်သွင်းရာတွင်အလွန်မြန်ဆန်သလိုသင်သည်
Synaptic Package Manager ( Menu - System - Administration - Synaptic Manager )တို့ မှ အဆင့်ဆင့် ရှာဖွေ၍ GUI method ဖြင့် programs / packages များကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ apt-get install ဖြင့်ထည့်သွင်း၍ ရသော programs/ packages များကို Synaptic Package Manager တွင် များသောအားဖြင့် ( အားလုံးမဟုတ်ပါ ) ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည် ။ ဤmethod သည် desktop usersများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ ဤ guide လမ်းညွှန်ချက်တွင် apt-get install ဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ။
Synaptic Package Manager မှ program/package များရှာဖွေ၍ထည့်သွင်းခြင်း
Menu-System - Administration - Synaptic Package Manager
သင်ထည့်သွင်းလိုသော program/ package အချို့အား ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဖော်ပြထားသော program/ package စာရင်းများအနက်မှလည်း ရွေးချယ် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
Installation ပြုလုပ်လိုသော program အားရွေးချယ်ပါ ၊ ရွေးချယ် လိုက်သော program အမှတ်ခြစ်ပါ ၊ Apply နှိပ်ပါ။
ရွေးချယ် လိုက်သော program နှင့် program အတွက် လိုအပ်သော dependencies များကို အလိုအလျောက်စက်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းသွားပါမည် ။
Package များအားလုံးသည် Terminal ( apt-get, aptitude, and Synaptic Package Manager) မှာအဆင်သင့် မရရှိနိုင်သော်လည်းပဲ Ubuntu Software Center မှရရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ ၊ Ubuntu စတင်အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် အလွယ်ကူဆုံး မြင်ကွင်းမှ packages များအား အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Menu -Application - Ubuntu Software Center
သင်ထည့်သွင်းလိုသော Program အချို့အား ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဥပမာ - mp3ဟုရိုက်လျှင် mp3 software စာရင်းများ မြင်ရမည်။ Installation ပြုလုပ်လိုသော program အားရွေးချယ်ပါ Apply နှိပ်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသော program(s) များသည် အလိုအလျောက် install ပြုလုပ်သွားမည်။ Manual Updates General Notes ကိုဖတ်ပါ။ Add Extra Repositories ကိုဖတ်ပါ။
Terminal မှ တဆင့် ကိုယ်ကိုတိုင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် (Command Line Interface ):
Synptic Package Manager ကို အသုံးချနည်း
Menu -System -Administration - Synaptic Package Manager -Reload then Mark all upgrades
အကယ်၍ package က updating လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ချက်ခြင်း install လုပ်သင့်ပါသည်။
Synaptic Package Manager ကို အသုံးချခြင်း
Menu - System - Administration - Synaptic Manager - Settings - Preferences - General - Reloading Outdated Package Information - Automatic
GNOME Desktop အတွက် အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Add-on icons တွေ themes နဲ့ Wallpapers များ 3-D effects များနှင့်အတူ အခြားသော မိမိ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်တာတွေ ရှိပါသည်။
Gnome Look (http://www.gnome-look.org) တွင် wallpapers တွေ splash screens တွေ icons တွေနဲ့အတူ Windows Mangers အတွက် (Metacity နဲ့ Compiz ပါဝင်သည့်) themes များနှင့် အခြားသော အသုံးပြု ဆော့ဝဲတွေ (appalication) များပါရှိပါသည်။
Maverick Meerkat wallpaper (https://wiki.ubuntu.com/Artwork/Incoming/Maverick) ဆိုဒ်မှ အခမဲ့သွားရောက် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Bootup မှာမြင်ရတဲ့ဟာက ကနဦး Splash Screen ဖြစ်ပြီး အခြားသော Plymouth Themes တွေကို Package Manger မှာသွားရောက် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အသစ်တစ်ခုကို Install ပြုလုပ်ချင်ရင်တော့
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Theme ကို ရွေးချယ်၍ တင်နိုင်ပါသည်။
Plymouth ကတော့ Bootup ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ မကြာခဏ Black Screen များပေါ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ nVidia Drivers တွေ ချက်ခြင်း အလုပ်မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။
................................................... ....................................................... ...................................................... p- 24 ........................................................ .......................................................... ..........................................................
sudo apt-get install splashy splashy-themes---
Metacity ဆိုတာက Gnome မှာပါတဲ့ မူလ Desktop Compositing Manager ပါ။ သူက ပေါ့ပါးခြင်း၊ ချက်ခြင်းပြောင်းလွဲခြင်း (streamlined) တွေနဲ့အတူ များများစားစားလဲ ပြုပြင်ပြောင်းလွဲစရာမလိုတဲ့ Options တွေပါဝင်သလို Gnome Look မှာတော့ Multiple Themes တွေ ချက်ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြန်သည်။
Compiz Fusion က window manager နဲ့ သီးခြားကွဲပြားပါသည်။ သူက Desktop effects တွေကို အဆင့်မြင့် ပြောင်းလွဲနိုင်တာဖြစ်ပြီး Cube တုံးသဖွယ်မျိုး Desktop ကို ပြောင်းလဲ ဖန်တီးနိုင်တာတွေလဲ ပါဝင်ပါသည်။ Ubuntu Users တော်တော်များများက Compiz ကိုရွေးချယ် အသုံးပြု ကြပါသည်။ ဒါကို Ubuntu မှာ အချိန်ခဏလေးနဲ့ အလွယ်တကူ Install ပြုချင်ရင်တော့-
Compiz ကို Window Manager အဖြစ်ထားချင်ရင်တော့
Compiz Configuration မှာ အောက်ကအတိုင်း သွားရောက်ရွေးချယ်ပေးပါ -
Menu - System -Preferences - CompizConfig Settings Manager
မှတ်ချက် ။ ပြောင်းလွဲထားတာတွေကို အဆင်ပြေဖို့က Process ပြီးသွားရင် Logout လုပ်ပြီးတော့ Login ပြန်လုပ်မှသာ ပြောင်းလွဲခြင်း effect ကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
Java install လုပ်ရန်
DosBox (http://www.dosbox.com/) သည် DOS-emulator (ဆက်စပ်ကိရိယာ) program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် CPU:286/386 realmode/protected mode, Directory FileSystem/ XMS/ EMS/ Tandy/ Hercules/ CGA/ EGA/ VGA/ VESA grahpics နှင့် SoundBlaster/Gravis Ultra Sound Card (ယခင်ဂိမ်းအဟောင်းများ၏ အသံဖြင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရန်) အသုံးပြုသည်။ သင်သည် ယခုခေတ် ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် ဆော့မရတော့သော ယခင်ဂန္တ၀င် ဂိမ်းများအား ပြန်လည် အသက်သွင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Scumm VM (http://scummvm.org/) သည် ရုပ်ပုံများအားညွှန်ပြခြင်း၊ Click လုပ်ခြင်းစသည့် ဂိမ်းဟောင်းများအား လက်ခံ၍ run ပေးပါသည်။ (သင့်တွင် ၎င်းတို့၏ ဒေတာဖိုင်များရှိရပါမည်။) Scumm VM သည် executables shipped များတွင် နေရာယူ၍ ဂိမ်းများကို Linux OS တွင် ကစားခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
Google Earth (http://earth.google.com/) မှ သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုလ်ကြီးကို အပေါ်စီးက မြင်တွေ့ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ဒီ software ဟာ အခမဲ့ package ဖြစ်ပါသည်။ (ဒီ package ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် License ကို accept လုပ်ရမှာဖြစ်ပါသည်။)
sudo apt-get install googleearth-package make-googleearth-package --force
ရရှိလာတဲ့ .deb file ကို click ၂ချက်နှိပ်ပါ။
Linux အတွက် နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ package ကို install လုပ်ရန်အတွက် Google Earth downloads (http://earth.google.com/intl/en/download-earth.html) ကိုသွားပြီး Download ဆွဲပါ။ ပြီးရင် အောက်က command နဲ့ install လုပ်ပါ။ wget http://dl.google.com/GoogleEarthLinux.bin/ chmod +x GoogleEarthLinux.bin ./GoogleEarthLinux.bin
Menu - Application -Internet -Google Earth 3D planet viewer
သင့်အနေနဲ့ Google Earth -View -မှာရှိတဲ့ Atmosphere setting ကို turn off လုပ်ထားသင့်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တိမ်တွေဖုံးနေတာကြောင့် မြေပြင်ကို ပြမှာမဟုတ်လို့ပါဘဲ။
Troubleshooting (ပြင်ဆင်ခြင်း) အကယ်၍ Google Earth ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ Loading ပြုလုပ်သည်။ loading ပြုလုပ်တဲ့ screen တတ်လာပြီး error ပြမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘာမှမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ error တတ်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံနေရပါပြီ။ အဲဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာ Google Earth ကို Terminal ကနေ ~/google-earth/googleearth လို့ရိုက်ပြီး run လိုက်ရင် ./googleearth-bin: relocation
/usr/lib/i686/cmov/libssl.so.0.9.8: symbol BIO-test-flags, version OPENSSL-0.9.8 not defined in file libcrypto.so.0.9.8 with link time reference ဆိုတဲ့ error ကိုပြပါလိမ့်မယ်။
ဒီပြဿ နာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် : သင် Google Earth ကိုသွင်းထားတဲ့ Folder ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Google Earth ဟာ သင့် home folder ထဲမှာပဲ ရှိနေတတ်ပါသည်။ ပြီးရင် libcrypto.so.0.9.8 ကိုရှာပြီး libcrypto.so.0.9.8.bak လို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ Google Earth ဟာ ပုံမှန်အတိုင်း သုံးလို့ရသွားပါလ်ိမ့်မယ်။
cd ~/google-earth sudo mv libcrypto.so.0.9.8 libcrypto.so.0.9.8.bak sudo ls -s /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 ~/google-earth/libcrypto.so.0.9.8
(သတိပြုရန် : သင့်အနေနဲ့ ~/google-earth လို့ရိုက်မယ့်အစား /home/user/google-earth လို့လဲရိုက်နိုင်ပါတယ်)
အခြား ပြဿ နာတွေအတွက်ကိုတော့ Ubuntu help pages on Google Earth (https://help.ubuntu.com/community/GoogleEarth) မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Google Earth အား Uninstall ပြုလုပ်ရန်
Uninstall ပြုလုပ်ဖို့အတွက် /home/user/google-earth Folder (သင် Google-earth ကို install ထားတဲ့ folder) မှာရှိတဲ့ uninstall shell script ကို run ပါ။
FBReader(http://www.fbreader.org/) သည် GTK platform ကို အခြေခံထားပြီး အခြား platform များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သည့် အခမဲ့ e-book reader တစ်ခုဖြစ်သည်။ install ပြုလုပ်ရန် :
Calibre (http://calibre-ebook.com) သည် e-book reader ဖြစ်ပြီး library manager အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Install ပြုလုပ်ပုံကို ဤနေရာတွင် (http://calibre-ebook.com/download-linux) ကြည့်ပါ။
ဂိမ်းများ (K)Ubuntu Linux အတွက် သဘာဝကျတဲ့ ဂိမ်းတွေရှိပါသည်။
Ubuntu Community Wiki -- Games (http://help.ubuntu.com/community/Games). Best Linux Games for 2008 (http://whdb.com/2008/top-25-linux-games-for-2008/). Best 25 Linux Games of 2007 (http://rangit.com/software/top-8-linux-games-of-2007/).
(K)Ubuntu မှာ ရာပေါင်းများစွာသော အခမဲ့ open-source ဂိမ်းတွေရှိပါသည်။ KDE Games collection (http://www.kde.org/application/games/) နဲ့ Gnome Games (http://live.gnome.org/GnomeGames/)collection အပါအ၀င်) အတော်များများကို သင့်ရဲ့ Package Manager ထဲက Games Section မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
PouetChess (http://pouetchess.sourceforge.net/) --ပြီးပြည့်စုံတဲ့ 3-D ချက်ထိုးတဲ့ Game တစ်ခုပါ။ Install ပြုလုပ်ရန်
PokerTH (http://www.pokerth.net/) --အလွန်ကစားရကောင်းတဲ့ Texas Hold 'Em Poker ပိုကာ Game ပါ။ (PPA repository (https://launchpad.net/~pkg-games/+archive/ppa) အသုံးပြုပြီး install လုပ်နိုင်ပါသည်။)
Kajongg (http://packages.ubuntu.com/maverick/kajongg)-- လူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ရုပ်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တွဲဖက်/ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမယ့် MahJongg (မာကျောက်)ကစားနည်းစစ်စစ်ပါပဲ။ Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt-get install kajongg
Planet Penguin Racer (http://en.wikipedia.org/wiki/Tux-Racer)--ပင်ဂွင်းငှက်ကလေးဟာ သုံးဖက်မြင် (3-D) အနေအထားနဲ့ နှင်းလျှောစီးသွားမယ်။ ငါးတွေကို ဖမ်းရမှာဖြစ်ပါသည်။ (Extreme TuxRacer (http://extremetuxracer.com/) ကတော့ နောက်ပေါ် ဗားရှင်းဖြစ်ပေမယ့် 32-bit မှာပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်)
KsirK (http://games.kde.org/game.php?game=ksirk)-- ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် သဲထိတ်ရင်ဖိုဆော့ကစားရမဲ့ ဂိမ်းပါ။ Install ပြုလုပ်ရန် sudo apt-get install kdegames
Racer (http://www.racer.nl/)-- တကယ့်ကို စိန်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ 3-D ပြိုင်ကားဂိမ်းပါ။ (Binary install ကိုဒီမှာ (http://www.racer.nl/dl_beta_linux.htm)တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပြေးလမ်းအသစ်နဲ့ extra add-ons (http://www.racer.nl/dl_content.htm) တွေလည်းရှိပါသည်။
TORCS (http://torcs.sourceforge.net/)--3-D ပြိုင်ကားဂိမ်းဖြစ်ပါသည်။ Install လုပ်ရန်
Supertuxkart (http://supertuxkart.sourceforge.net/) --ပြိုင်ကား အသေးစားလေးများကို မောင်းနှင်ရတဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါသည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
Pingus (http://pingus.seul.org/) --ရဲ့ညီအစ်ကိုဖြစ်တဲ့ Lemming (လီမင်) အစားပင်ဂွင်းငှက်ကလေးတွေကို အသုံးပြုထားတာပါ။ Install ပြုလုပ်ရန်
Frozen Bubble (http://www.frozen-bubble.org/)--ပူပေါင်းဖောက် ကစားနည်းတစ်ခုပါ။ Install ပြုလုပ်ရန်
Frets on Fire (http://fretsonfire.sourceforge.net/)--Guitar Hero နဲ့ ဆင်တူပါတယ်သင့်အနေနဲ့ Community Site တွေကနေတဆင့် Guitar Hero (http://www.geetarfreaks.webs.com/Viva%20La%20Music.html)ထဲက သီချင်းတွေကို သွင်းယူနိုင်ပါသည်။ community sites (http://fretsonfire.wikidot.com/custom-songs) မှာလဲ အသေးစိတ်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
Scorched3d (http://www.scorched3d.co.uk/)--နှစ်ဘက်မြင်ကို သုံးဖက်မြင် (3-D) အဖြစ် ကစားနိုင်မယ့် အမြောက်ပစ်ဂိမ်းပါ။ Install လုပ်ရန်
Pyscrabble (http://pyscrabble.sourceforge.net/) (နှင့် pyscrabble-server)-- Online Scrabble (စကားလုံးမိတ်ဆက်) ဂိမ်းနဲ့ server ဖြစ်ပါသည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt-get install pyscrabble pyscrabble-server
(Lexulou နဲ့ Internet Scrabble Club တို့မှာလည်း Scrabble နဲ့ပုံစံတူ browser-based online ဂိမ်းတွေရှိပါသည်။ Internet Scrabble Club ကတော့ Java ကို install လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ Java install လုပ်ရန်
Wing Commander Linux (http://priv.solsector.net/) ရဲ့ အခမဲ့ဗားရှင်းကို Binary ဖိုင်အဖြစ် ဒီမှာ Download (http://sourceforge.net/projects/privateer/)ယူနိုင်ပါပြီ။
Vdrift (http://vdrift.net/) သည် အခမဲ့ open source ဖြစ်ပြီး Need For Speed ကဲ့သို့သော realistic physics, multiple drift tracks, and multiplayer များပါဝင်သော 3-D ပြိုင်ကားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Joysticks များဖြင့်သော်လည်းကောင်း Mice နှင့် keyboard ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Linux အတွက် Binary package အား ထို website မှ download လုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အက်ရှင်ဂိမ်းတွေကို (Top 25 မှ ဂိမ်းများအပါအ၀င်) Ubuntu မှာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ အတော်များများကို
Menu - Application - Ubuntu Software Center - Games
ကနေပြီး install လုပ်နိုင်ပါသည်။
Alien Arena (http://icculus.org/alienarena/rpa/about.html) --multi-player first personshooter အက်ရှင်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး အခမဲ့ server များနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်ပါသည်။ (Package : alien- arena) (Server : alien-arena-server)
sudo apt-get install alien-arena sudo apt-get install alien-arena-server
OpenArena(http://www.openarena.ws/)-- Open-Source multi-player first person shooter အက်ရှင်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး အခမဲ့ server များနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်ပါသည်။
sudo apt-get install openaren sudo apt-get install openarena-server
Tremulous (http://www.tremulous.net) -- Halo နဲ့ဆင်တူပြီး multiplayer first person shooter action ဂိမ်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းအတွက် Repositories ရှိပါသည်။
sudo apt-get install tremulous sudo apt-get install tremulous-server
Sauerbraten (http://sauerbraten.org/) - Cuber မှဖြစ်ပြီး Graphic ကောင်းကောင်းနဲ့ multi player ဆော့နိုင်တဲ့ First person shooter game ဖြစ်ပါသည်။
sudo apt-get install sauerbraten sudo apt-get install sauerbraten-server
Nexuiz (http://www.alientrap.org/nexuiz/) -- (ပြိုင်ပွဲများ) ပါဝင်တဲ့ open-source multi-player First person shooter game ဖြစ်ပြီး free servers များနဲ့ဆော့ကစားနိုင်ပါသည်။
sudo apt-get install nexuiz sudo apt-get install nexuiz-server
မြေပုံ ၃၅ခုပါတဲ့ add-on community pack ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ (http://www.alientrap.org/nexuiz/downloads.php) ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဲတာကို install လုပ်ချင်ရင်တော့ map pack ကို /home/username/.nexuiz/data (ဒါမှမဟုတ်~ /.nexuiz/data)မှာ ဖြည်ချပေးပါ။ မှတ်ချက်။ ဒီထဲက ဂိမ်းတော်တော်များများဟာ graphics လိုအပ်ချက်တွေရှိပါသည်။ ဒါတွေကို ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ hardware driver တွေကို လုံလုံလောက်လောက် activate လုပ်ထားရပါမယ်။
Urban Terror (http://www.urbanterror.net) သည် multiplayer first person shooter အက်ရှင်ဂိမ်း (ဆာဗာထည့်သွင်းပြီး) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် open-source quake3engine ကိုအသုံးပြုထားပြီး တကယ့် လက်နက်များ၏ အသုံးပြုနိုင်မှုများအား ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ အခမဲ့ server များဖြင့် multi-player ဆော့နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် လူငယ်များဆော့ကစားခွင့်အား ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ Download ပြုလုပ်ပြီး ဤအညွှန်း(http://www.urbanterror.info/docs/ texts/110) ကိုအသုံးပြုကာ install လုပ်နိုင်ပါသည်။
Skulltag ရဲ့ZDoom (http://zdoom.org/wiki/Compile_ZDoom_on_Linux) နဲ့ ProBoom (Freedoom) တို့ဟာ Doom2 ရဲ့ ဗားရှင်းခွဲတွေဖြစ်ပါသည်။ Doom3 အတွက်ကိုတော့ Ubuntu ပေါ်က Doom3 (http://help.ubuntu.com/community/Doom3) မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Skulltag(http://skulltag.net/wiki/Installation_for_Ubuntu) သည် ZDoom (http://zdoom.org/wiki/Compile_ZDoom_on_Linux) ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး network play ကစားနိုင်ပါသည်။ (K)Ubuntu တွင် install လုပ်နည်းအား website (http://skulltage.net/wiki/Installation_for_Ubuntu)တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (အကယ်၍သင့်တွင် မူလ Doom2.wad မရှိပါက အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော Freedom Iwad ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။) မှတ်ချက် Modules အတော်များများသည် Universe repositories မှ သီးခြားလိုအပ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် Universe repositories ကို enable ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ Synaptic Package Manager -Settings - Repositories - Edit Software Sources - Community-maintained Open Source software (universe) -(အမှန်ခြစ်ပေးပါ။))
Install ပြုလုပ်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု
ထို့နောက် skulltage ၏ repositories များ update များထည့်၍ skulltage နှင့် DoomSeeker(Skulltag online server) အား install ပြုလုပ်ပါ။
echo deb http://skulltag.net/download/files/release/deb/ jaunty multiverse / sudo tee /etc/apt/source sudo apt-get update sudo apt-get install skulltage doomseeker-skulltag
အကယ်၍ သင့်တွင် doom2.wad,tnt.wad သို့မဟုတ် plutonia.wad မရှိပါက freedoom.wad ကိုသင့် ~/.skulltag folder သို့ copy လုပ်နိုင်ပါသည်။
cd ~/.skulltag wget http:/mirror.cinquix.com/pub/savannah/freedoom/freedoom-iwad/freedoom-iwad-0.6.4.zip/ unzip freedoom-iwad-0.6.4.zip cp freedoom+/doom2.wad. rm freedoom-iwad-0.6.4.zip
အကယ်၍ သင့်တွင် (skulltag-server,firewalls နှင့် skulltag ဖြင့် port forwarding ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက်)အကူအညီများလိုအပ်ပါက ဤထပ်တိုး လမ်းညွှန်ချက်များအား ကြည့်ပါ။
Skulltag ကို မည်သည့် platform, မည်သည့် graphics, မည်သည့် စက်တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော add-on များ၊မြေပုံများ၊ gameplay mode များအား ရွေးချယ်မကုန်နိုင်အောင် အသုံးပြုကစားနိုင်ပါသည်။
PrBoom (http://prboom.sourceforge.net/) သည် မူလ first person shooter action game ဖြစ်သည့် Doom2 (http://en.wikipedia.org/wiki/Doom_II) သည် အခမဲ့ open source port ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ZDoom ၏ advanced option များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ Freedoom သည်မူလ Doom2,wad ကိုနေရာယူမည့် အခမဲ့ Iwad (မြေပုံစု)ဖြစ်ပါသည်။
ဤဂိမ်းအတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသော မြေပုံ (Wads) (http://www.doomword.com/10years/bestwads/) ရှိပါသည်။ သင့် home directory သည် သင့် မြေပုံ (wads) များ သိမ်းဆည်းရန် အလွယ်ကူဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်။
သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲအနေဖြင့် /user/share/games/doom folder, ကိုအသုံးပြု၍ folder အားမည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
chmod -R 777/usr/share/games/doom
သင့်မူလဂိမ်းထဲမှ doom2.wad,tnt.wad,နှင့် plutonia.wad တို့အား ဤ folder ထဲတွင်ထည့်ပါ။ အကယ်ဤသင့်တွင်မရှိပါက usr/share/games/freedoom version မှ doom2.wad ကို ဤ folder သို့ copy လုပ်နိုင်ပါသည်။ သင် internet မှ Download လုပ်ထားသော .wad ဖိုင်အသစ်များကိုလည်း ဤ folder ထဲတွင်ပင် ထည့်သွင်းပါ။ ပြီးနောက် ဂိမ်းအား မူလ မြေပုံဖြင့်ဖြစ်စေ၊သင့် .wad မြေပုံသစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ကစားနိုင်ပါသည်။
prboom -iwad /home/user/wads/doom2.wad-file /home/user/wads/new_wad.wad
မှတ်ချက်။ doom2,wad,tnt.wad, သို့မဟုတ် plutonia.wad တို့ကိုသာလျှင် iwad အဖြစ်အသုံးပြု၍ ရပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် wad အသစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုပါက အထက်ပါ၃ခုမှ တစ်ခု ရှိရပါမည်။ ပြဿနာရှိလာပါက doom2.wad ကိုသုံးပါ။
မှတ်ချက်။ ဤဂိမ်းအား Menu -Applications - Ubuntu Software Center -Games ရှိ Freedom မှ install လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော် timidity နှင့် timidity-interfaces-extra ကို install ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
The Spring Project (http://spring,clan-sy.com) သည် Star Wars Imperial Winter (http://www.imperialwinter.com/) နှင့် Complete Annihilation (http://spring.clan-sy.com/wiki/Complete_Annihilation#Introduction) တို့ကဲ့သို့ အခမဲ့ multiplayer ဂိမ်းများအား ရေးဆွဲခြင်း၊ကစားခြင်းတို့အတွက် scripting engine platform ဖြစ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
Regnum Online MMPORG (http://www.regnumonline.com.ar/index.php?sec=61=1) အတွက် အကူအညီလိုအပ်ပါက အခြေခံ installation (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=615246) ပြုလုပ်နည်းနှင့် help forum (http://www.regnumonline.com.ar/forum/forumdisplay.php?f=15) တွင်ကြည့်ပါ။
PlaneShift (http://www.planeshift.it/) သည် စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ ပြည့်သိပ်နှစ်မြုပ်နေသည့် online fantasy ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Client နှင့် patches များအား ဒီနေရာတွင် download (http://www.planeshift.it/download.html) လုပ်နိုင်ပါသည်။
Download လုပ်ထားသော Binary Installation ဖိုင်အား executable ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
cd /directory_where_downloaded chmod +x PlaneShift-v0.5.4-x64.bin
root အနေဖြင့် executable လုပ်ထားသောဖိုင်အား run ပါ။
Install လုပ်ရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာပါ။ Whether to manually set permissions ဟုမေးလာပါက no ဟုဖြေပေးပါ။ Install ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် အသုံးပြုသူတော်တော်များများသည် ဂိမ်းအား User အားလုံးအသုံးပြုနိုင်ရန် /opt တွင် install လုပ်ခြင်းထက် user တစ်ဦးတည်း အသုံးပြုနိုင်မည့် /home directory တွင် install ပြုလုပ်ခြင်းကို ပိုအလေးပေးကြသည်။ /opt တွင်install လုပ်ခြင်းသည် အလုပ်ပိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့် user account အား Games Group တွင်ထည့်သွင်းပါ။
Menu - System - Administration - Users and Groups - user- Manager Groups -games- Properties - Group Members -user (အမှန်ခြစ်ပါ)-OK
Download the updater patch psupdaterlinux64.zip and unzip it to your download directory. Run the updater as root:
chmod +x psupdater chmod +x psupdater.bin sudo ./psupdater---
PlaneShift Registration (http://www.planeshift.it/register.html)တွင် စာရင်းသွင်း၍ အခမဲ့ အကောင့်တစ်ခုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် game ကို menu တွင်ထည့်သွင်းထားပါက
Menu - Applications - Lost Found - Client and Setup တွင်ရှိပါလိမ့်မည်။
Menu မှ run ချင်ပါက Run in terminal ကို အမှန်ခြစ်လုပ်ပေးရပါမည်။ Command-line Terminal မှ run ချင်ပါက
sudo /opt/PlaneShift/pssetup sudo /opt/PlaneShift/psclient
မှတ်ချက်။ DSL connection ဖြင့် 32-bit ဗားရှင်း အသုံးပြုပါက လေးပါသည်။
သင့်ရဲ့ Internet connection အား Internet applications များဖြင့် အပြည့်အ၀အသုံးပြုနိုင်သည်။ Web browsers,Email clients, Instant Messengers, နှင့် အမျိုးအစားအများပါဝင်သည်။
Mozilla Firefox (http://www.mozilla.com/en-US/) သည်နေရာအများတွင် တွေ့ရသည့် web browser ဖြစ်သည်။ open source components တွင် အခြေခံထားသော်လည်း သင်၏ အမည် သို့မဟုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ပါဝင်ထားပြီး တခုခုပြောင်းလဲထားခြင်းဖြင့် ထပ်မံ ဖြန့်ဖြူးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိသုံးနေသော version အားတင်ရန် :
Adblock Plus plug-in (block ads inaweb page)
Adblock Plus (http://adblockplus.org/en/)ဖြင့် web pages များတွင် Blocks ads လုပ်နိုင်သည်။ သင့်အနေနဲ့ subscribe လုပ်ခြင်းဖြင့် အခမဲ့ Filter Service နှင့် ကြော်ငြာများကို တစ်ချက်တည်းနှင့်ပိတ်ရန် အတွက်ထပ်ပေါင်းနိုင်ပါသည်။
သင့်အနေနဲ့ ၎င်း extension အား add ရန် Firefox Tools - Add -on -Get Add -ons -Search All Add-ons-AdBlock Plus. (ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်လျှင် firefox အနေဖြင့် automatic updates လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။)
Noscript (http://noscript.net/) သည် Internet ပေါ်တွင် browsing လုပ်ရာတွင် Sercuriy တိုင်းတာချက်အရ အရေးကြီးပါဝင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ Scripts များဖြင့် Internet မှတဆင့် Viruses များနှင့် Trojans တို့သည် computers သို့ရောက်ရှိသည်။ ၎င်း plugin ဖြင့် မည်သည့် scripts အား Allow နှင့် blocks the rest လုပ်မည်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၎င်း extension အား add ရန် Firefox - Tools - Add -ons -Get Add-ons -Search All Add -ons-Noscript. (ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်လျင် firefox အနေဖြင့် automatic updates လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။)
RefreshBlocker plug-in (prevents redirects)
RefreshBlocker (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/refreshblocker/) သည် မည်သည့် website(and pages)အား redirect(based on META tags within the webpage)ပြုလုပ်ရန်အတွက် user များအား ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ သို့ပေသော်လည်း Firefox (as of version 3.5) တွင် အားလုံး directs လုပ်ခြင်းကို blocks လုပ်သည်မှာ default ဖြစ်သည်။ စိတ်ကြိုက်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် firefox redirect control အား turnoff လုပ်ပြီး ၎င်းအစား RefreshBlocker သုံးသည်။
သင့်အနေနဲ့ ၎င်း extension အား add ရန် Firefox -Tool -Add-ons-Get Add-ons -Search All Add-ons-RefreshBlocker. (ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်လျင် firefox အနေဖြင့် automatic updates လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။)
Turn off the Firefox automatic redirect blocker
Firefox - Enter about : config in the browser location bar-right-click on accessibility:blockautorefresh - Toggle to change the value from true to false
User Agent Switcher (http://chrispederick.com/work/user-agent-switcher/) သည် အခြားသော browser ကဲ့သို့ အယောင်ဆောင်ခြင်းကို ပြုလုပ်သည်ခွင့်ပြုခြင်း (အချိန်လွန်) broser-specific ပါရှိသောအကြောင်းအရာများကို displayed ပြုလုပ်ရန်။
သင့်အနေနဲက ၎င်း extension အား add ရန် Firefox -Tool -Add-ons-GetAdd-ons- Search All Auto-ons-User Agent Switcher. (ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်လျင် firefox အနေဖြင့် automatic updates လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
Video DownloadHelper plug-in for Firefox
Video DownloadHelper (http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon3006) သည် youtube ကဲ့သို့သော site များမှ videos (Flash Videos အပါအ၀င်) ကို download ရယူရန်ဖြစ်သည်။
သင့်အနေနဲ့ ၎င်းextension အား add ရန် Fierfox -Tools -Add -ons- Get Add -ons-Search All Add-ons-Video DownloadHelper. (ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်လျင် firefox အနေဖြင့် automatic updates လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။)
UnPlug (https://addons.mozilla.org/en.US/firefox/addon/2254)add-on သည် webpag ပေါ်တွင် embedded လုပ်ထားသော video နှင့် Audio များကို Save လုပ်ယူနိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့် ၎င်း extension အား add ရန် Firefox -Tool- Add-ons-Get Add-ons-Browse All Add-ons. (ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်လျင် firefox အနေဖြင့် automatic updates လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။)
Lucifox (eBook reader extension)
Lucifox (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lucifox/) (Lucidor for Firefox) သည် e-book များကို ဖတ်ရန်နှင့် Firefox window မှနေ catalogs များကို browsed လုပ်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Install ပြုလုပ်ရန်ယ website သို့သွားပြီး နောက် Dwownload Now နေရာတွင်ရယူနိုင်သည်။
ယခု package သည် Java Runtime Enviroment install နှင့်တူညီသည်။ (OpenOffice Installed သောအခါ or ubuntu-restricted -extras installed သောအခါ JRE ပါဝင်သည်။)
မှတ်ချက် : သင့်အနေဖြင့် product ကိုအသုံးပြုရန် product license အား မလွဲမသွေ လက်ခံရမည်။
၎င်း pluginသည် Adobe Acrobat(pdf) files များကို firefox browser တွင် ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
Read Add Extra Kubuntu Repositories and enable the Natty partner repository :
deb http://archive.canonical.com/ubuntu natty partner/
ပြီးပါက Adobe Reader ထည့်သွင်းရန် :
သို့မဟုတ်ပါက ၎င်း plugin အား the Medibuntu repository list တွင်လည်း ရရှိနိုင်သည်။ Medibuntu repository အား သင့်ရဲ့ repository list တွင်ထည့်ရန် :
deb http://packages.medibuntu.org// natty free non-free
ပြီးပါက Adober Reader ထည့်သွင်းရန် :
Firefox အတွက် offical Adobe Flash Plugin 10 အား တင်ရန် :
Gnash(http://www.gnashdev.org/) သည် 32-bit version ကဲ့သို့ 64-version အတွက်လည်း ရယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Adobe Flashplayer အတွက် source အား ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
installing ပြီးနောက်, သင့် web browser ရဲ့ Preference - Application ထဲရှိ SWF and SPL files များကို Gnash ဖြင့်သုံးမည်ဟု ကြေငြာရမည်။
၎င်း package သည် ယခုလက်ရှိ အသုံးများသော VIC player အား Firefox browser ရှိ play media တွင် အသုံးပြုသည်။
Gecko MediaPlayer (http://kdekorte.googlepages.com/gecko-mediaplayer) သည် Gecko-based broswers (Firefox,SeaMonkey,IceApe,Opera) များတွင် Mplayer မှ multimedia သို့ သုံးပြုသည်။
နောက်တစ်ခုအနေဖြင့် Firefox အတွက် mplayer အားသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်း package ဖြစ်သည့် the Kaffeine media player (often used in KDE-based desktops) သည် Firefox browser တွင် multimedia အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။
၎င်း package ဖြစ်သည့် Helix player (https://helixcommunity.org/) (the open source player that plays Real Player content in Linux) သည် Firefox browser တွင် RealMedia အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။
Moonlight (http://www.go-mono.com/moonlight) သည် Silverlight (the Microsoft multimedia presentation platform) အား open source အဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားနေသော the Novell Mono ၏ project ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ffmpeg အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Firefox3web browser တွင် ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားပြီး, plugin ကဲ့သို့(အခြားသော mozilla browsers ကောင်းကောင်းသုံးနိုင် ရန်ပြုလုပ်ထားပြီး plugin ကဲ့သို့(အခြားသော mozilla browsers များတွင်လည်းလုပ်နိုင်သည်။) mozilla-based browsers ဖြစ်သော Version 2.3 တွင်လည်း plugin အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
stable version 2.4 အား ဒီနေရာတွင် (http://www.go=mono.com/moonlight/stable.aspx) ရနိုင်သည်။ The Moonlight 3.99 plugin (compatible with most Silverlight 3/4 content) အား ဒီနေရာတွင် (http://www.go--mono.com/moonlight/prerelease.aspx) ရနိုင်သည်။
Netflix streaming အတွက်လိုအပ်ချက်နှစ်ခုမှာ the capabilities of Silverlight 2.0 နှင့် Digital Rights Management modules ဖြစ်သည်။ သို့ပေသော်လည်း လက်ရှိအမျိုးအစားဖြစ်သော Moonlight 2.0 တွင်လည်း Silverlight content (including Netflix content) သုံးနိုင်သည် ,linux အတွက် Digital Rights Management modules အား Netfilix မှ အဆင်သင့် မဖြစ်သေး ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး Netflix (http://www.netflix.com/ContactUs) သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး သတင်းရယူနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် ဤနေရာတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး (http://www.petitiononline.com/Linflix) တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
(Chrome browser အတွက်Google မှပြုလုပ်နေသော)An HTML5 Netflix plugin မကြာမီ သုံးစွဲနိုင်တော့မည်။ အခြားသော နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ Netflix Android app အား virtual Android environment တွင်လည်း သုံးစွဲနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
FireFTP (http://fireftp.mozdev.org/) သည် Firefox extension တွင် FTP transfers အတွက်ဖြစ်သည်။
Firefox တွင် drop-down list ရှိ browser bar အားပိတ်ထားရန်။
၎င်းသည် Firefox တွင် တစ်ခါတစ်ရံမှသာ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ပြဿနာ ဖြစ်သည်။ drop-down list ရှိ location browser bar အား ပိတ်ထားရန် (http://kb.mozillazine.org/Browser.urlbar.maxRichResults) (ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့် browsing history အားပြသတော့မည်မဟုတ်ပါ။)
Firefox - about:config (in the location browser bar) - browser.urlbar.maxRichResults- right-click-Modify-set value to 0
IceCat (http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_IceCat) သည် Mozilla ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်၊ တားမြစ်ချက်များမရှိသော Firefox အခြေပြု Browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ Debian project မှထောက်ပံ့ပေးသည်။ ယခင်က IceWeasel နာမည်နှင့်ဖြစ်ပြီး၊ယခု IceApe Browser နာမည်သို့ ပြောင်းလိုက်သည်။ နောက်ဆုံး version ကို Install လုပ်ဆောင်ရန် Terminal တွင် အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်ပါ။
SeaMonkey (http://www.seamonkey-project.org/) သည် web browser, IM (IRC) client, Email client,RSS/News reader နှင့် အခြား web development tools များပါဝင်သော အင်တာနက် application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Mozilla ၏ ထုတ်ကုန်များကို အခြေခံထားပြီး၊ Mozilla ၏ မူပိုင်ခွင့်၊ ဖြန့်ဝေသုံးစွဲခွင့်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ Thunderbird နှင့် Firefox ကဲ့သို့ Seamonkey အတွက် Plugins အမြောက်အများရှိသည်။ Seamonkey ကို Install လုပ်ဆောင်ရန် Terminal တွင် အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်ပါ။
IceApe (http://en.wikipedia.org/wiki/Naming_conflict_between_Debian_and_Mozilla) သည် web browser, IM (IRC) client, Email client, RSS/News reader နှင့် web development tools များပါဝင်သော open-source အင်တာနက် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ Seamonkey ကို အခြေခံထားပြီး၊ မူပိုင်ခွင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းများမရှိပေ။ Debian project မှထောက်ပံ့ပေးထားသော application ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး version ကို Install လုပ်ဆောင်ရန် Terminal တွင် အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်ပါ။
Opera (http://www.opera.com/) သည် မူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်ရှိသော proprietary browser, internet suite တစ်ခုဖြစ်သည်။ Mobile devices အချို့နှင့် game consoles များတွင်လဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Email, address book, IRC chat, integrated BitTorrent နှင့် webfeeds များပါဝင်သည်။ Plugins အနည်းငယ်လဲရှိသည်။ Install လုပ်ဆောင်ရန် Opera ၏ website မှ Download (http://www.opera.com/browser/download/) လုပ်ပြီး၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ဆက်လုပ်ပါ။ သို့မဟုတ် အောက်ပါ command များကို အသုံးပြုပြီး Opera repository မှတဆင့် Install လုပ်နိုင်သည်။
echo deb http://deb.opera.com/opera// stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list wget -o -http://deb.opera.com/archive.key/ I sudo apt-key add - sudo apt-get install opera
Chromium (http://dev.chromium.org/) သည် Google Chrome browser ကို အခြေခံထားသော open-source browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ Chromium ကို Install လုပ်ရန် Terminal တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ပါ။
Chromium ကို အသုံးပြုရန် အောက်ပါအတိုင်းသွားပါ။
Menu - Applications - Internet - Chromium Web Browser
Google Chrome (http://www.google.com/chrome) သည် Google မှထုတ်သော browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ Chromium browser ကိုအခြေခံထားပြီး၊ Google ၏ နာမည်၊ လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်၊ GoogleUpdate ဟုခေါ်သည့် အလိုအလျောက် Update စနစ်၊RZL နှင့် အခြား Google add-ons များပါဝင်သည်။ Google Chrome ကို ဤနေရာမှ (http://www.google.com/chrome/eula.html) ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး၊ install လုပ်ပါ။
Browsers များထက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ငန်းစဉ် လွယ်ကူပြီး၊ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်၊ အမှားနည်းစေရန် ပြုလုပ်ထားသော ဆော့လ်ဝဲများဖြစ်သည်။ အချို့ Download Managers များတွင် အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်မကောင်းပါက ခဏရပ်တန့်ထားပြီး၊ နောင် ကွန်နက်ရှင်ပြန်ကောင်းမှ ဆက်လက်ဒေါင်းလုတ်နိုင်သော Resuming Downloads Option လဲပါဝင်သည်။
MultiGet (http://multiget.sourceforge.net/) သည် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ လွယ်ကူစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် Download Manager တစ်ခုဖြစ်သည်။ GTK ကို အခြေခံထားပြီး GUI (Graphical User Interface) နှင့်ဖြစ်သည်။ HTTP/FTP စနစ်တို့ကို ထောက်ပံ့ပြီး၊ Resuming Downloads ကိုလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ SOCKS 4,4a,5 proxy, ftp proxy, http proxy တို့နှင့်လဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။ MultiGet ကို Install လုပ်ဆောင်ရန် Terminal တွင် အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Usenet Clients ဆိုသည်မှာ ယခင်တုန်းက အသုံးပြုကြသော အင်တာနက်ပေါ်ရှိ Discussions Group တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုခေတ် အသုံးများကြသော ဖိုရမ်များ၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိုရမ်များကဲ့သို့ပင် ပို့စ်များတင်ခြင်း၊ အခြားသူများတင်ထားသော ပို့စ်များကို ဖတ်ရှုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးချက်များ၊ ပို့စ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးအလိုက် စုစည်းထားပြီး newsgroup ဟုခေါ်သည်။ ဆွေးနွေးချက်များကိုလည်း Threads များခွဲထားသည်။ Usenet Discussion Group မှ ဆွေးနွေးချက်များကို ဖတ်ရှုရန် Usenet Clients ဟုခေါ်သော ဆော့လ်ဝဲများသုံးရန် လိုအပ်သည်။
Pan (http://pan.rebelbase.com/) Pan သည် Usenet မှ ဆွေးနွေးချက်များကို ဖတ်ရှုရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် Gnome-based ဆော့လ်ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ nzb (http://en.wikipedia.org/wiki/Nzb) binary downloader တစ်ခုလဲ ဖြစ်သည်။ Pan ကို Install လုပ်ရန် Terminal တွင် အောက်ပါ Command ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Kwooty (http://kwooty.sourceforge.net/) သည် Usenet မှ ဆွေးနွေးချက်များ ဖတ်ရှုရန်အတွက် KDE4 တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆော့လ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ nzb (http://en.wikipedia.org/wiki/Nzb) binary downloader တစ်ခုလဲဖြစ်သည်။ Kwooty ကို Install လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော Files များ၊ PPA repositories များ၊လမ်းညွှန်ချက်များကို Kwooty website တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
mIRC, Gtalk ကဲ့သို့ ချက်တင်လုပ်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊video calling များလုပ်ဆောင်နိုင်သော ဆော့လ်ဝဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Empathy (http://live.gnome.org/Empathy) ဆိုသည်မှာ Open Source IM ဆော့လ်ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤဆော့လ်ဝဲသည် Ubuntu (Gnome) အသုံးပြုသော desktop များတွင် ပုံမှန်ပါဝင်သော ဆော့လ်ဝဲတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Pidgin (http://www.pidgin.im/) ဆော့လ်ဝဲလ်သည် Open Source IM ဆော့လ်ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆော့လ်ဝဲလ်သည် Ubuntu (Gnome) အသုံးပြုသော desktop များတွင် ပုံမှန်ပါဝင်သော ဆော့လ်ဝဲလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိ Empathy ကိုသာ ပုံမှန် အစားထိုးသုံးလျက်ရှိသော်လည်း မြန်မာပြည်၏ MPT လိုင်းနှင့် အခြားသော Proxy ထည့်သွင်းရသော လိုင်းများအတွက် သင့်တော်သည်။
Accounts=Add : protocol XMPP username gmailaccount (@gmail ဖြည့်ရန်မလိုပါ) Domain gmail.com
Advanced Force old (port 5222) SSL ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ connect port တွင် 443 ဖြည့်ပါ။ connect server တွင် talk.google.com ဖြည့်ပါ။ အားလုံးပြီးလျှင် Add ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Kopete (http://kopete.kde.org/) ဆိုသည်မှာ Kubuntu Os (KDE) အတွက် default ပါဝင်သော ချက်တင် ဆော့လ်ဝဲဖြစ်သည်။
Kopete အတွက် ပုံစံ (http://www.kde-look.org/index.php?xcontentmode=24x26) ကို ထည့်သွင်းပြီး Kopete တွင် မိမိနှစ်သက်ရာ ပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါနေရာတွင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Kopete - Settings - Configure - Chat Windows -Style -Get New...
GoogleTalk on Kopete
Kopete ကိုအသုံးပြုပြီး GoogleTalk (http://www.google.com/talk/about.html) Instant Messaging အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း VOIP ကို အသုံးမပြုနိုင်သဖြင့် အသံဆက်သွယ်ခြင်းရမည်မဟုတ်ပါ။ Jabber Protocol ကိုသုံးထားသည်။ ဤနေရာတွင်လေ့လာပါ။ GoogleTalk instructions (http://www.google.com/support/talk/bin/answer.py?answer=57557).
Konversation (http://konversation.kde.org/) သည် kubuntu တွင် default ပါဝင်သော IRC ချက် ဆော့လ်ဝဲလ်ဖြစ်သည်။ mIRC အလားတူဆော့လ်ဝဲလ် တစ်ခုဖြစ်သည်။
aMSN သည် MSN ရဲ့ client ဆော့ဝဲကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်သော ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Pidgin တွင်လည်း အလားတူသုံးနိုင်သည်။
သင့်အင်တာနက်လိုင်းအနေဖြင့် အဆင်ပြေနိုင်မပြေနိုင် မသိသော်လည်း ဖိုင်များ လွယ်ကူစွာ ဆွဲယူကူးပြောင်းနိုင်မှုကို Ubuntu Geek (http://www.ubuntugeek.com/how-to-enable-drag-and-drop-capabilities-to-amsn.html) တွင် ဖတ်ရှုနှိုင်သည်။
Emesence (http://www.emesene.org/) သည် ရိုးရှင်းသောပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော MSN messager တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလားတူပင် [#Pidgin l Pidgin] တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Videoconferencing and voice over Internet (VOIP) applications are merging into integrated applications.Most of these applications now allow placing calls to non-Internet based telephones forasmall fee.
ယခင် Gnomemeeting ဟုသိခဲ့ကြသည့် Ekiga(http://www.gnomemeeting.org/) သည် SIP အား အပြည့်အ၀လိုက်နာသည့် function အပြည့်အစုံပါ VOIP နှင့် Video စနစ်ပါ အသုံးပြုနိုင်သော ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။
Skype (http://www.skype.com/) သည် Ekiga ကဲ့သို့ VOIP နှင့် Video စနစ်သုံး ဆက်သွယ်ရေး ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော်လည်း Open-Source မဟုတ်ပါ။ Skype ဆက်သွယ်မှုများအား အသံသွင်းယူခြင်း
Install ပြုလုပ်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ
နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းအား ရယူရန်နှင့် 32 -bit ဗားရှင်းအား download နှင့် install ပြုလုပ်ရန်
wget -O skype-ubuntu-current_i386.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-beta-ubuntu-32/n sudo dpkg - i skype-ubuntu-current_i386.deb sudo rm skype-ubuntu-current_i386.deb
-ယခင်က အချို့ သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ မိုက်ခရိုဖုန်းများအား 2.1.0.47 နောက်ပိုင်း ဗားရှင်းများတွင် သုံးစွဲ၍ မရသောကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ command များ သုံးခဲ့ကြသည်။
wget -O skype-ubuntu-current_i386.deb http://download.skype.com/linux/skype-debian_2,1.0.47-1 sudo dpkg - i skype-ubuntu-current_i386.deb sudo rm skype-ubuntu-current_i386.deb
နောက်တစ်နည်း wget -O skype-ubuntu-current_ amd64.deb http://download.skype.com/linux/skype-ubuntu-intrepid sudo dpkg - i skype-ubuntu-current_amd64.deb sudo rm skype-ubuntu-current_amd64.deb
Skype အား 64-bit system များတွင် install ပြုလုပ်နည်း 64-bit system အတွက် Skype ၏ လက်ရှိ version သည် 32 bit module အား 64 အတွက် အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ 64 bit system တွင် install ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခြား package များအား ဦးစွာ install ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
sudo apt-get install ia32 - libs lib32asound2 libqt4 - core libqt4 - gui
ပြီးနောက် လက်ရှိ Skype version ၏ .deb package အား Skype website မှ download ပြုလုပ်၍ install ပြုလုပ်ပါ။
wget - O skype _ ubuntu - current _ amd64 . deb http://www.skype.com/go/getskype - linux - beta - ubuntu - 64/ sudo dpkg - i skype - ubuntu - current _ amd64.deb sudo rm skype - ubuntu - current _ amd64.deb
အကယ်၍ 64-bit version သည် သင့်အတွက် အလုပ်မလုပ်ပါက 32-bit version အား အသုံးပြုနိုင်သည်။
wget - O skype - ubuntu - current _i386.deb http://www.skype.com/go/getskype - beta - ubuntu - 32/n sudo dpkg - i -- force - architecture skype - ubuntu - current _ i386.deb sudo rm skype - ubuntu - current_i386.deb
Installing Skype respository
Skype ၏ respository ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်လည်း Skype အား install လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် auto update ပြုလုပ်ပေးသည့် အကျိုးကျေးဇူးရှိပါသည်။
-Resopsitory security key အား install လုပ်ရန် (key server အတွက် သင့် firewall ၏ port 11371 အား ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်သည်။
sudo apt - key adv -- keyserver pgp.mit.edu --recv -keys 0xd66b746e
-Skype repository,update ထည့်ခြင်းနှင့် Skype အား install ပြုလုပ်ခြင်း။
echo deb http://download.skype.com/linux/repos,debian// stable non - free l sudo tee -asudo apt -get update sudo apt -get install skype
မူပိုင်ခွင့်အရ မှတ်ပုံတင်ထားသော ထပ်ဆောင်း package များ
ူမူပိုင်ခွင့်အရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် software များသည် အင်တာနက် အသုံးပြုရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။ သို့သော် လွတ်လပ်စွာ ရယူသုံးစွဲခွင့်မရှိပါ ။ Multimedia Codecs များ၊ Java Runtime Environment နှင့် Firefox အတွက် plug-in များသည် ထိုကဲ့သို့သော software များဖြစ်သည်။
ကန့်သတ်ထားသော ထပ်ဆောင်း package များ
Ubuntu တွင် ကန့်သတ်ထားသော ထပ်ဆောင်း package များကို ထည့်သွင်းလိုလျှင် command-line Terminal တွင် command တစ်ခုတည်း ရိုက်ထည့်ရုံဖြင့် လုပ်ဆောင်န်ိုင်ပါသည်။ ထို package များတွင် Adobe Flash Player, Jave Runtime Environment (JRE) (sun-java-jre) နှင့် Firefox plug-in (icedtea) များ Microsoft မှ ထုတ်ဝေသော Font တချို့ (msttcorefonts) ,multimedia codecs (w32codecs or w64codecs), mp3 compatible encoding (lame), FFMpeg, extra Gstreamer codecs, DVD decoding အတွက် package များ (libdvdread4,သို့သော် အခြား decoder ဖြစ်သည့် libdvdcss2 ကို ရယူလိုပါက ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။) ,unrar archiver,odbc နှင့် cabextract ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် အခြားသော အကျိုးအမြတ်ရယူသည့် codecs များနှင့် avutils (libavcodec-unstripped-52 နှင့် libavutil-unstripped-49) များကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးမည်ဖြစ်သည်။
sudo apt -get install ubuntu - restricted - extras
မှတ်ချက် : ထည့်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် command-line Terminal တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြီးဆုံးမှသာ ပြည့်စုံ၍ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုဖော်ပြထားသော package အားလုံးကို Package Manager အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းပါက ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ဓာတ်ပုံများကို ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D ပုံများနှင့် ဂရပ်ဖစ်များကို ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် Format ဖိုင်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်။
Gimp (http://www.gimp.org/) သည် အစွမ်းထက်သော စွမ်းရည်ပြည့်ဝသည့် free open-source ဖြစ်ပါသည်။ ဂရစ်ဖစ်များနှင့် ဓာတ်ပုံများပြင်ဆင်သည့် Adobe Photoshop နှင့် ဆင်တူသော ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည်။
GIMP အတွက် သီးသန့် brushe များ palette များနှင့် gradiend များရှိပါသည်။
sudo apt-get install gimp - data - extras
Dia (http://live.gnome.org/Dia) သည် Gnome အတွက် ပြုလုပ်ထားသည့် GTK အခြေခံ diagram ဖန်တီးသည့် open source ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။ Visio နှင့် ဆင်တူပါသည်။
Kivio (http://www.koffice.org/kivio/) သည် flow-chat များနှင့် diagram များကို ဖန်တီးသည့် open source ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး KDE အတွက် ပြုလုပ်ထားသည့် KOffice Suite တွင် ပါဝင်ပါသည်။ Dia ဖယောင်းမိတ္တူများ ပြုလုပ်၍ ရပါသည်။
Inkscape Vector Illustrator (http://www.inkscape.org/) သည် Illustrator / CorelDraw စသည်တို့နှင့် တူညီသည့် open source ပုံဆွဲပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။
Digikam (http://www.digikam.org) သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံများကို ပြင်ဆင် စုစည်းသိမ်းဆည်းဖို့ အလွန်အဆင်ပြေသော open source ဖြစ်ပါသည်။ install လုပ်လိုလျှင်
F-spot (http://f-spot.org/) သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံများကို ပြင်ဆင်စုစည်းသိမ်းဆည်းဖို့ အလွန်အဆင်ပြေသော Gnome Desktop အတွက် ပြုလုပ်ထားသည့် open source ဖြစ်သည်။
sudo apt -get install f-spot
Google Picasa (http://picasa.google.com.mm/linux/) သည် Digikam ကဲ့သို့ပင် ဓာတ်ပုံပြင်ဆင်သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ အွန်လိုင်းအသုံးပြုထားပါက Google web server သို့ တိုက်ရိုက်ပုံများကို upload လုပ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစ်ိတ်သိလိုပါက Picasa for Linux FAQ (http://picasa.google.com/linux/faq.html) တွင် ကြည့်ပါ ။ Picasa 2.7 Download (http://picasa.google.com/linux/download.html#picasa27) နေရာတွင် ကိုယ်တိုင် install လုပ်နိုင်သည့် .deb ဖိုင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Shotwell (http://www.yorba.org/shotwell/) အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာ (http://www.youba.org/shotwell/install/) တွင် အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Terminal မှ သွင်းရန်
Tesseract (http://code.google.com/p/tesseract-ocr/) သည် command-line ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် optical character reader တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
sudo apt-get install tesseract -ocr
Ocropus (http://code.google.com/p/ocropus/) သည် Tesseract ကို အသုံးပြုထားသည့် document - analysis engine တစ်ခုဖြစ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်:
sudo apt -get install ocropus
Xsane (http://www.xsane.org/) သည် Scan ဖတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲလ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ Xsane ကို Install လုပ်ရန် Terminal တွင် အောက်ပါ Command ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
Gnome - Scan (Scanning Utility)
Gnome - Scan (http://projects.gnome.org/gnome-scan/) သည် Scan ဖတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲလ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ Gnome - Scan ကို Install လုပ်ရန် Terminal တွင် အောက်ပါ Command ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
Gwenview (http://gwenview.sourceforget.net/) သည် KDE တွင် ဓာတ်ပုံများကြည့်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော ဆော့လ်ဝဲ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပုံများကို rotate လုပ်ခြင်း၊ crop လုပ်ခြင်း၊ resize လုပ်ခြင်း စသည့် အခြေခံတည်းဖြတ်မှုများလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Gwenview ကို Kubuntu တွင် default အနေနှင့် ထည့်သွင်းထားသည်။ (K menu - Graphics - Gwenview Image Viewer) Gwenview ကို Install လုပ်လိုပါက Terminal တွင် အောက်ပါ Command ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
.................................... ................................... ................................. Pg 50 အထိ
........................................................Pg 51 မှ 97 အထိ
Ubuntu ကို စတင်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် mp3,mp4 ဖိုင်များသည် OS တွင် default ပါလာသည့် Totem Movie Player သို့ Rhythmbox Music player တို့ ဖြင့် ဖွင့်၍ မရနိုင်ပါ ။ Ubuntu OS တွင် Default ပါဝင်သော software များအားလုံးတို့သည် GNU GENERAL PUBLIC LICENSE ဖြင့် အခမဲ့ရရှိနိုင်သော open source software များ သာပါဝင်ပါသည် ။
Ubuntu Software Center > Ubuntu restricted extras ဟု ရှာဖွေထည့်သွင်းပေးရပါမည် ။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက (http://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats/PlayingDVDs ) တွင်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
VLC media player VLC media player (http://www.videolan.org/vlc/)သည် GNU GENERAL PUBLIC LICENSE ဖြင့် အခမဲ့ရရှိနိုင်သော videoLAN project's media player ဖြစ်ပါသည် ။ ယင်း media player ဖြင့် ဖွင့်နိုင်သော file format များမှာ MPEG, MPEG-2,MPEG-4, DivX, MOV,WMV,QuickTime,WebM,FLAC,MP3,Ogg/Vorbis files, DVDs,VCDs,podcasts များတို့နှင့် multimedia steams အနေဖြင့်လည်း network မှ တဆင့် streaming server အဖြစ်လည်း လွှင့်နိုင်ပါသည် ။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက-http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo နှင့် http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo တို့တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည် ။
့Ubuntu Software Center မှသွင်းရန်
Ubuntu Software Center > vlc media player
Webcam Applications ထည့်သွင်းခြင်း
ဤဆော့ဝဲများသည် Webcam အသုံးပြုသောဆော့ဝဲများဖြစ်ပါသည်။မိမိတို့ပုံများကို Effect များ ထည့်သုံး၍ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သော ဆော့ဝဲများဖြစ်သည်။
Cheese Webcam Booth Cheese (http://projects.gnome.org/cheese/)သည် Gnome-based webcam ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံများ ၊ ဗွီဒီယို များကို သင်စိတ်ကြိုက် window size အရွယ်အစားဖြင့် fancy visual effect များဖြင့် လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
-Kamoso (https://kde-apps.org/content/show.php/Kamoso?content=111750)သည် KDE-base webcam ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
Camorama -Camorama(http://camorama.fixedgear.org/index.php)သည် Cheese ကဲ့သို့သော webcam ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး Gtk based ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
-Xawtv(http://git.linuxtv.org/xawtv4.git) သည် Cheese ကဲ့သို့သော webcam ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး Gtk based ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ScreenCasts ပြုလုပ်ရန် အသုံးတည့်သော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Click on X in the window bar-Advanced -No Border(ticked)
sudo apt-get-install xawtv
ဤဆော့ဝဲများကို Gnome/KDE Ubuntu နှင့် Kubuntu များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Open Office(http://www.openoffice.org) ကို Ubuntu တွင် ပုံမှန်အနေဖြင့် ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ ပါဝင်သော ဆော့ဝဲများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြရလျှင် --Writer (Word ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သည်),Presentation (PowerPoint ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သည်),Calc spreadsheet (Excel ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သည်) , နှင့် Base relational database (Access ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သည်)
Word 2007 အား Open Office တွင် အသုံးပြုခြင်း
နောက်ဆုံးထွက် Open Office သည် .docx ဖိုင် (Word 2007) ဖိုင်များအား ပုံမှန်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Libre Office (https://www.libreoffice.org/)သည် free and open source (GPL-licensed)office suite တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခင်က OpenOffice နှင့် အတူတူ ပင်ဖြစ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်:
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install libreoffice libreoffice-gnoma
KOffice(http://www.koffice.org/) သည် KDE project ၏ တစိတ်တဒေသဖြစ်ပြီး OpenOffice suite ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား OpenOffice လိုင်စင်အောက်မှ မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤ program အား မည်သည့် ubuntu versionတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Abi Word (http://www.abisource.com/) သည် လျှင်မြန်ပြီး စုပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သော စာစီစာရိုက်စနစ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက် versionအား ကြည့်ရန် the Abi Word website (http://abisource.com/com/wiki/Install-on-Ubuntu) ကို သွားပါ။
Repositories မှ install လုပ်ရန်
Xournal (http://xournal.sourceforge.net/) သည် အခမဲ့ (GPL-licensed) ဖြစ်ပြီး မှတ်စု ရေးသားခြင်း။ ပုံကြမ်းဆွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) stylus အသုံးပြု၍ ဂျာနယ် များ သိမ်းဆည်းခြင်း များအတွက် GTK/Gnome အား အခြေခံထားသည့် အသုံးချ software ဖြစ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန် universe repositories အား enableပြုလုပ်ထားရမည်။
PDF (https://en.wikipedia.org/wiki/Portable-Document-Format) ဖိုင်သည် Adobe Acrobat (အခြားe-book readers များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သော) Format တစ်ခုဖြစ်သည်။ Ubuntu တွင် PDF ကဲ့သို့ ဖိုင်များအတွက် အသုံးဝင်သည့် program အများအပြားရှိပါသည်။ Synaptic Package Manager တွင် pdf ကို ရိုက်၍ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
(K) Ubuntu သည် မည်သည့် Document (စာရွက်စာတမ်း) ကိုမဆို PDF Format သို့ အလိုအလျောက် ထုတ်ခွင့်ပြုပါသည်။ မည်သည့် application မှာမဆို
File- Print -Print to File - Output:PDF
Evince (http://projects.gnome.org/evince/) သည် PDF ဖိုင်များ ကြည့်ရှုရန်အတွက်အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်သည်။ PDF ဖိုင်များသည် Evince နှင့် အလိုအလျောက် ဖွင့်နိုင်သည်။ထို့ကြောင့် PDF ကို click လုပ်လိုက်ပါက (Nautilus ကဲ့သို့သော File manager မှ ဖွင့်ပါက) Evinceနှင့် အလိုအလျောက်ပွင့်မည်ဖြစ်သည်။ Evince ကို ဤသို့ လည်း စတင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Menu- Office - Evince
CUPS Print manager hasaplugin to seamlessly print PDF documents. Install:
Gscan2pdf (http:// gscan2pdf.sourceforge.net/) သည် PDF file အဖြစ်သို့ scan ဖတ်နိုင်သော utility ဖြစ်ပါသည် ။ များပြားသော ရွေးချယ်စရာများဖြင့် scan ဖတ်နိုင်ပါသည် ။ Installပြုလုပ်ရန် -
PDF -Shuffler (PDF file management)
PDF - Shuffler (http://sourceforge.net/projects/pdfshuffler/files/)သည် အခမဲ့ရ GTK-based utility ဖြစ်ပြီး PDF file များ ၊ များပြားလှသော စာမျက်နှာများ သို့ PDF file တစ်ခုလုံးအားပြန်လည်၍ အသေးစိတ် ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ စာမျက်နှာ အားလှည့်ခြင်း ၊ ပေါင်းထည့်ခြင်း သို့ ဖျက်ပစ်ခြင်း တို့ ကို သင် စိတ်ကြိုက် ပြုင်ဆင်နိုင်ပါသည် ။ PDF file များအားပြန်လည်တည်းဖြတ် နိုင်သော မရှိမဖြစ် အသုံးတည့် သော tool ဖြစ်ပါသည် ။ Install ပြုလုပ်ရန် -
Menu - Office - PDF - Shuffler
Max View (PDF File management)
Max View (http://sourceforge.net/projects/maxview/) is utility to capture , manipulate and rearrange,and print .pdf and .max files. Written in Qt, it is similar in some respects to Paperport.
-Download (http://sourceforge.net/projects/max view 0.7-2/) and install the .deb package (use i386 instead of amd64 if usinga32-bit OS):
wget - O maxview current.deb nowikihttp://sourceforge.net/projects/maxview/files/maxviewo.7-2/maxvie sudo dpkg- i maxview current .deb
Start Max View inaGUI by creatingamenu item with the Command: maxview /home/user, where/ home/user is the directory in which you wish Max View to start.
PDF edit (PDF File editor)
PDF edit (http://pdfedit.petricek.net/en/index.html) isafree (GPL - licensed), Qt - based PDF file editing and manipulation program that usesaGUI for editing.Install:
sudo apt-get install pdf edit
Import PDF files into Open Office Writer
PDF files can be imported (htt://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport) into the OpenOffice Writer word processor asahybrid document ( notascanned character document ) by installing:
sudo apt-get install openoffice.org-pdf import
Import PDF files into K Word
Kword is the Word Processor package in K Office.It allows the importing of PDF files by default.
PDF- X Change (PDF file editor)
PDF-X Change (http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer) isafree Windows-based application to view,modify,or perform simple editing of PDF files.It works under Wine.
Groupware တွင် ဝေမျှသုံးသော ပြက္ခဒိန်များ၊ Email server စုစည်းထားမှုများ၊ အစုအသင်းများ၏ လိပ်စာ စာရင်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၏ စီမံကိန်းများ နှင့် အသင်းအဖွဲ့များအတွင်း message ပို့ခြင်းများ ပါဝင်သည်။
၎င်းတို့သည် LAMP (သို့) အလားတူserverများ တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပို၍ လိုအပ်သည်။
Groupware servers များမှာ Server platform ပေါ်တွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် သီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ်versionတစ်ခုအတွက် (အမြန်နှုန်းကောင်းစေရန်အတွက်) Ubuntu server version အား တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။
Kolab (http://www.kolab.org/) သည်အပြည့်စုံဆုံးသော Open- source groupware ဖြစ်ပြီး platform မျိုးစုံအတွက် ဖြန့်ချီထားသည်။ ၎င်းတို့သည် Ubuntu (Evolution အပါအ၀င်) KDE/Kunbuntu (Kcontact အပါအ၀င်) တို့နှင့် ကောင်းစွာ ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အခမဲ့၊ GPL လိုင်စင်ဖြင့် ပွင့်လင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သော်လည်း (အခြားအုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲများနှင့် မတူသည့်အချက်မှာ ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအတွက် အကူအညီရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက်
အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် Outlook (MS -Exchange) နှင့် Mozilla တို့နှင့်လည်း တွဲဖက်နိုင်သည်။ သို့သော်
ဂျာမန်ထုတ်ဖြစ်သည့်အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသဖြင့် အသုံးပြုနည်းတွင် အကန့်အသတ်များ ရံဖန်ရံခါ ရှိတတ်သည်။ Kolab ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ရင်းမြစ်မှ တပ်ဆင်ပုံ (ယခုလက်ရှိ ဗ.၂.၂) အတွက် ညွှန်ကြားချက်များ ပေးထားသည်။ ဗ ၂.၂ တွင် Horde ၀က်ဘ်ပုံစံပါဝင်သည်။ လက်ရှိ beta အဆင့် Debian အတွက် ညွှန်ကြားချက်များမှာ [ HERE -http://wiki.kolab.org/index.php/Debian - Administrators - Kolab-Installation] (သို့) OpenPkg အတွက် ညွန်ကြားချက်များမှာ [ HERE - http:// files.kolab.org/server/release/kolab-server-2.2.4/ix 86 - debian 5.0/1st.README ] မှတ်ချက် ။ Kolab သည် ၎င်းကိုယ်ပိုင်serverအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Kolab ကို သီးသန့်ဆာဗာပေါ်တွင် အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မတူညီသော port များကို ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် အခြားသောserverမိုဂျူးများဖြင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခြင်းကို ရှောင်လွှဲကာ စက်တစ်လုံးတည်းပေါ်တွင် အခြားသောserverများကိုပါ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ compiler နှင့် အခြားသော လိုအပ်သည့် အရာများကို တပ်ဆင်ရန်
-အသုံးပြုနည်း မပါဝင်သေးသော Kolab version အသစ် (v.2.2) Ubuntu/ Kubuntu
အတွက်လည်း ရှိပါသည်။ တပ်ဆင်ရန်မှာ
Manual Kolab installation
-Kolab တပ်ဆင်ရန်အတွက် folderတစ်ခုဆောက်ပါ။ ၎င်းကို အားလုံး အသုံးပြုခွင့်ပေးပါ။
sudo mkdir/ kolab sudo chmod 777 / kolab
-Optional: kolab ကို ၎င်း အတွက် ကိုယ်ပိုင် အပိုင်းတွင် တပ်ဆင်လိုပါက ဦးစွာ အပိုင်းသစ် အရင်ပြုလုပ်ပါ။ (ဥပမာ - Gparted ကို သုံး ၍ ) ထို့နောက် ၎င်းအပိုင်းအတွက် နာမည်ပေးပါ။
sudo rdisk - 1
၎င်းသည် / dev / sda3ကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်။ အဆိုပါ / deb /sda3(သင်ပြုလုပ်သောအပိုင်း ) ကို /etc/ fstab ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် /kolab အဖြစ်တင်ပါ။
sudo nano / etc /fstab
ထို့နောက် နောက်တစ်ကြောင်း ထပ်ပေါင်းပါ။
/dev /sda3/kolab ext3defaults , rw00
ထို့နောက် restart ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမှား ကင်းခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ kolab အား download ပြုလုပ်ထားသည့် နေရာတွင် folder တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။
-လက်ရှိ Kolab file များအား Download ပြုလုပ်ရန် Folder တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။
cd / tmp mkdir / kolabtmp
-နောက်ဆုံးထွက်ရှိသည့် Kolab file များအား Download ပြုလုပ်ပါ။
cd / tmp /kolabtmp
! --- wget -r-11-nd--no-parent nowikihttp://files.kolab.org/server/release/kolab-server- 2.2.2 /ix 86 -debian 4.0 // nowiki ---
wget - r - 11 - nd -- no - parent nowikihttp:// files.kolab.org/server/release/kolab - server- 2.2.2 /sources /
Root အနေဖြင့် sudo-s ကို အသုံးပြုကာ Kolab အား install ပြုလုပ်ပါ :
sudo-s sh install - kolab.sh 21 l tee kolab - install .log
သင့် ကွန်ပျူတာအား restart ပြုလုပ်ပါ။ Kolab service များအား ရပ်ဆိုင်း၍ Configuration utility ကို ဖွင့်ပါး
sudo / kolab /bin /openpky rc all stop sudo / kolob / sbin /kolab bootstrap -b
သင့်အနေဖြင့် မိမိ၏ အချက်အလက်များဖြစ်သည့် host ၏ အမည် ၊ ( ၎င်း ကို hostname -fဖြင့် သိနိုင်သည် ) domain အသေးစိတ်အချက်အလက် စသည်တို့အား ဤအဆင့် မပြုလုပ်မီတွင် သိရှိထားသင့်ပါသည်။ Kolab သည် slabd open LDAP server တို့ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့် Open LDAP (http://www.openldap .org /) နှင့် LDAP (http://en.wikipedia.org/ wiki /LDAP) ၏ အခြေခံအချက်အလက်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိသေးပါက သင့်အနေဖြင့် လေ့လာထားသင့်ပါသည်။]
-Kolab ၏ service များအားလုံးအား ပြန်လည်စတင်ပါ။
sudo / kolab /bin /openpkg rc all start
-Manager အား အသုံးပြု ၍ bootstrap configuration တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် password ဖြင့် web administrator interface သို့ Login ပြုလုပ်ပါ။
Citadel (http://www.citadel.org/) သည် အသင့်သုံး open source groupware ဖြစ်ပြီး KDE နှင့် Kolab- 1 နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်မှ Bulletin - board ပုံစံ framework အား အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းသည် KDE , Gnome နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ရ Web အခြေပြု ပုံစံလည်း သုံးစွဲနိုင်သည်။ WebDAV နှင့်လည်း တွဲဖက်နိုင်ပြီး Thunderbird ဖြင့် လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
-Install the Citadel server:
sudo apt - get install citadel - server
-Install the Citadel client:
sudo apt - get install citadel - client
sudo apt - get install citadel -suite
eGroupware (http://www.egroupware.org/) သည် အခြေခံခိုင်မာ တည်ငြိမ်သော (GPL လိုင်စင်ဖြင့်) Open Source အုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပြီး LAMP (Ubuntu server ဖြင့် တပါတည်း ပါရှိသောserver) နှင့် Postfix mail (နှစ်မျိုးစလုံးကို ဦးတည်ထည့်သွင်းထားသင့်ပါသည် )ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ versionအသစ်ကို မကြာသေးမီကပင် ရရှိနိုင်ပြီး ဂျာမနီမှ ကော်ပိုရိတ်စပွန်စာဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး versionတို့ပါဝင်သည်။ Clients များဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုမှာ များစွာတိုးတက်လာပါသည်။ eGroupware သည် အသင်းအဖွဲ့ လိုက် ဆော့ဝဲလ်များအားလုံးတွင် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံးသော တပ်ဆင်ချိန်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ အားနည်းချက်မှာ လက်ရှိ versionအတွက် အသုံးပြုနည်းအများစုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် မရရှိနိုင်သေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Open - Xchange (http://www.open-xchange.com/wiki/index.php? title = Quick - install -guide -for-the-Server-Edition-Ubuntu 8.04) သည် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အသင်းအဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ် (MS - Exchange ကို အစားထိုးရန် ရည်ရွယ်သည် )ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အဖွဲ့အစည်းပုံစံသစ်ဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်းကို စီးပွားဖြစ် ဗားရှင်းပေါ်တွင် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး .deb package သည် Hardy Heron 8.04 အတွက် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အခြားသော clients များ ဖြစ်သည့် Kontact,Outlook,Palm PDAs များဖြင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြည့်စုံသော တပ်ဆင်ပုံညွှန်ကြားချက်များကို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် လေ့လာနိုင်သည်။
OpenGroupware (http://www.opengroupware.org/) သည် postgre SQLdata baseစ်အပေါ်တွင် အခြေပြုထားသော အသင်းအဖွဲ့ လိုက် ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် စီးပွားဖြစ်ပုံစံနှင့် Open Sourceပုံစံ (၂၀၀၈ တွင် တိုးတက်မှု ရပ်ဆိုင်းသွားသည် )ရှိသည်။ အသစ်မထွက်တော့သောကြောင့် တပ်ဆင်မှုကို Source မှ တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်းရမည်။ အသေးစိတ်ကို ၀က်ဘ်တွင်ကြည့်ပါ။
Zarafa (http:// zarafa.com/?q=en/content/community -O) သည် ဥရောပ၏ ဦးဆောင် MS-Exchange
အစားထိုး အုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယခင်က ပုဂ္ဂလိကပိုင် ၊နောက်ပိုင်း (မှတ်ပုံတင်အမှတ်မှလွဲ၍)
GPL လိုင်စင်ဖြင့် Open Source အဖွဲ့အစည်းပုံစံကို ၂၀၀၈တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Zimbra (http://www.zimbra.com/downloads/os-download.html) သည် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်ပြီး (ယခု VMWare မှ ပိုင်ဆိုင်သည် ) Open Source အဖွဲ့အစည်းပုံစံကို ထုတ်ပေးထားသည်။ လက်ရှိတွင် အခမဲ့ပေးသော်လည်း အဖွဲ့အစည်းပုံစံတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိပြီး GPL လိုင်စင်မပေးပေ။ တင်သွင်းလိုက်သော ပြောင်းလဲမှုများ၊ပါဝင်ရေးသားမှုများသည် VMWare ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သွားသည်။ Zimbra wiki (http://wiki.zimbra.com/wiki/Main-Page) ကိုကြည့်ပါ။ Lucid Lynx 10.04 LTS အတွက် Beta version ကို 64 bits အသုံးပြုသူများအတွက် ရရှိနိုင်ပြီး အဟောင်း Hardy 8.04 ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
School Tool (http://www.schooltool.org/) သည် အခြေခံနှင့် အလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းများအတွက် ပြက္ခဒိန်၊ ပညာရည်မှတ်တမ်း ၊ကျောင်းခေါ်ချိန် ၊ကျောင်းသား အချက်အလက် သိမ်းဆည်းရာများအတွက် Open Source အုပ်စုဖွဲ့ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Ubuntu မှ စပွန်ဆာပေးထားသော Shuttleworth ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အကူအညီဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားချက်များကို ကြည့်ပါ။ installation instructions (http://book.schooltool.org/htmlhelp/install.html)
Sugar CRM Community Editon
Sugar CRM (http://www.sugarcrm.com/crm/download) သည် ဖောက်သည်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်ပြီး အရောင်းအင်အားစုများ (အရောင်း ၊ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေး၊ ထောက်ပံ့ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ၊ အချိန်ခွဲဝေမှုများ) အကြားတွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရာတွင် သုံးလေ့ရှိသည်။ Sugar CRM အဖွဲ့အစည်းပုံစံကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန်သုံးစွဲကြသည်။ LAMPserverကို ဦးစွာတပ်ဆင်သင့်သည်။ (sudo tasksel install lamp- server ) Sugar CRM ကို /var/www သို့ ဖြည်ထုတ်ပါ။ ထို့နောက် nowikihttp:// localhost/SUGAR- FOLDER/nowiki သို့ Logon ၀င်ပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် SugarCRMserverအသစ်ကို LAMP နှင့်ှSugarCRM အဖွဲ့အစည်းပုံစံ အသင့်ပါပြီး တပ်ဆင်ရန် (binary) instrallation (http://www.sugarcrm.com/crm/download #installers) ပုံစံဖြင့်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
အုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ်များသည် Kontact/KMail/,Mozilla Thunderbird (သို့) SeaMonkey
တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်။
Evolution Exchange သည် MS Exchange 2000 2003 သို့ (Outlook Web Access ) ကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Install:
sudo apt - get install evolution - exchange
Kontact Personal Information Manager တကိုယ်ရည်သုံး အချက်အလက်မန်နေဂျာသည် Ubuntuတွင် တပါတည်းပါဝင်ပြီးဖြစ်ပြီး အခြားသော အစုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ်များဖြင့် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ interfaces with many groupware servers (http://kontact.kde.org/groupwareservers.php).
KDE အုပ်စုဖွဲ့ဆော့ဝဲလ် အလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်မှု Kubuntu သည် အလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်မှု (Script) ဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ်ဆာဗာနှင့် clients (Kontact / Kmail စသည်များ ) ကို ဆက်သွယ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်။ ယခုလက်ရှိ ထောက်ပံ့နိုင်သော အုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ်များမှာ Kolab, eGroupware, SUSE Linux Openexchange နှင့် Novell Groupwise တို့ဖြစ်ကြသည်။
Zimbra Desktop (http://www.zimbra.com/products/desktop.html) သည် Zimbraserverအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Zimbra Desktop FQA များ ကို ကြည့်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Ubuntu Forums Zimbra Desktop Installation thread  (http://ubuntuforums.org/showthread.pmp?p=10634207)
Oracle Calendar Desktop Client (http://www.oracle.com/ technology /products/ cs /user _ info / ocalendar /desktop _ index.html) သည် oracle အုပ်စုဖွဲ့ ဆော့ဝဲလ် နှင့်data baseစ် နှင့် အသုံးပြုရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြက္ခဒိန်ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်သည် ။ Oracle Calendar Desktop Client ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်
wget nowikihttp: // ww.k_state.edu /infotech /calendar /oracle _10 _ clients / DesktopClients/ Linux /cal linu
tar _ xvf cal _linux _1011.tar.gz
ဖြည်ထုတ်ပြီးသော ဖိုင်များကို folder ထဲသို့ နေရာပြောင်းပါ။
cd Cracle Calendar_ inst /
mv cal_ linux cal _ linux.bak; cat cal _ linux . bak l sed s/export LD _ ASSUME - KERNEL / # Xport LD _ASSUME _KERN
chmod + x gui _ install .sh cal _ linux
GUI ဖြင့် ထည့်သွင်းမှုကို စတင်ပါ။
sudo sh gui _ install .sh
အသင်းအဖွဲ့ လိုက် ပြက္ခဒိန်များ
DA Vi Cal Calendar Server
DA Vi Cal (http://wiki. davical. org/ w/ Main_ Page) သည် CalDAV (http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV) , postgre SQL, Apache php တို့ကို အခြေခံထားပြီး Mozilla Thunderbird/Lightning/Sunbird,Evolution နှင့် အခြားသော ပြက္ခဒိန် client များဖြင့် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ install:
sudo apt - get install davical
Darwin Calendar Server (http://trac.calendarserver.org/) ပြက္ခဒိန်serverသည် Apple ၏ CalDAV (http://en.wikipedia.org / wiki /CalDAV ) Open Source port ကို အခြေခံထားသော ပြက္ခဒိန် server ဖြစ်ပြီး
Mozilla Thunderbird / Lightening/Sunbird,Evolution နှင့် အခြားသော ပြက္ခဒိန် client များဖြင့် ကောင်းစွာ
အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ version ၁.၂ ကို သိမ်းဆည်းထားသော နေရာများမှ တပ်ဆင်ရန်မှာ (အသေးစ်ိတ်ညွှန်ကြားချက်များကို ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြည့်ရှုပါ။ )
sudo apt - get install calendarserver
WebCalaendar (http://www.k5n.us/webcalaendar.php?topic=About) သည် ICS (http://en.wikipedia.org/wiki/I Calendar) ကို အခြေခံထားသော အုပ်စုဖွဲ့ ပြက္ခဒိန်များအတွက် server ဖြစ်ပြီး အမျိုးမျိုးသောdata base များဖြင့် တွဲဖက်သုံးနိုင်သည်။ PHP ဖြင့် ရေးသားထားပြီး Sunbird/Thunderbird (Lightning) , Apple iCal, and Evolution စသည့် clients များဖြင့် တွဲဖက်သုံးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးversionကို RSS( http://en.wikipedia.org/wiki/RSS ) clients သုံးကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး version (၁.၂) ကို တပ်ဆင်ရန် ၀က်ဘ်ဆိုဒ် နှင့် the wiki (http://www.k5n.us/wiki/index.pmp? title = Main _Page) ကို ကြည့်ပါ။ versionအဟောင်း (၁.၀၅) ထည့်သွင်းရန်
sudo apt - get install webcalendar
Postfix / Dovecot (Mail Server)
Postfix (http://www.postfix.org/) သည် Open Source mail server ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Dovecot (http://www.dovecot.org/) , Open Source IMAP (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol) POP3(http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol)serverများဖြင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။ ထပ်မံသိရှိလိုပါက official Ubuntu documentation(http://help.ubuntu.com/11.04/serverguide/C/email_services.html) တွင် ကြည့်ပါ။ dovecot - postfix metapackage သည် အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ပြီး Maildir (mail spooling) folderစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ချိန်ညှိမှုဆိုင်ရာ ဖိုင်များကို ပြုပြင်သည်။ Imap and Pop3 မိုဂျူး၊ SMTP နှင့် SASL/TLS (သက်သေခံလက်မှတ်ပါသော) များကို အလိုအလျောက်တပ်ဆင်သည်။
sudo apt - get install dovecot - postfix
iRed Mail (http://code.google.com/p/iredmail/wiki/installation_on_Ubuntu) သည် Dovecot, Postfix,achoice of Open LDAP (with phpLDAPAdmin) or MySQLdata baseစ်၊ ၀က်ဘ်အခြေပြု မေးလ်အတွက် Roundcubemail or Squirrelmail ၊ phpAdmin, Postfix Admin, and A Wstats တို့ကို ပါဝင်သော package ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Lucid 10.04 LTS တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် စီမံထားပြီးserverအသစ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (၎င်းသည် အီးမေးလ် ဆိုင်ရာ ချိန်ညှိမှုဖိုင် များစွာကို မူလအနေအထားဖြစ်စေရန် ပြုပြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ) ၎င်း၏ အဖွဲ့အစည်းပုံစံတွင် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သော ပုံစံ၏ အရည်အသွေးများစွာပါဝင်သည်။
Forabrief introduction, see this list of 10 Linux financial tools http://ubuntudoctor.com/content/news/10-linux-financial-tools).
KMyMoney (Personal Fiance Management)
KMyMoney (http://kmymoney2.sourceforge.net/index-home.html) ကို ကျွမ်းကျင်အကောင့် (Accountants) သမားတွေ အသုံးပြုသလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ KMyMoney မှာလည်းပဲ MyMoney နှင့် Intuit Quicken ကဲ့သို့ ငွေစာရင်းတွေကို double - accounting နဲ့ အသုံးပြုနိုင်သလို ၊ လုပ်ငန်းအတွက်လဲ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးအစားအလိုက် စီမံနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပါသည်။ ကို KDE/Kubuntu အတွက် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Gnome/Ubuntu တို့မှာလဲ သွင်းယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
sudo apt - get install kmymoney2
Gnu Cash (Personal Finance Management)
GnuCash (http://www.gnucash.org/) ဟာ အခမဲ့ပေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး GPL လိုင်စင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပွင့်လင်းရင်းမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ပါသည်။GnuCash မှာ ငွေစာရင်းတွေကို double- accounting နဲ့ အသုံးပြုနိုင်သလို ကျွမ်းကျင်အကောင့် (Accountants) သမားတွေကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကို GTK - based (Gnome 2) ကို အခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခု နောက်ဆုံးversionကို source files ကနေ သွင်းယူလို့ရနေပါပြီ။ Gnu Cash (http://www.gnucash.org/) မှာ ထည့်သွင်းမှုပုံစံတွေနဲ့ ရနိုင်တဲ့ ဗားရှင်းတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
sudo apt - get install gnucash
Skrooge (Personal Finance Management)
Skrooge (http://skrooge.org/) ဟာ အခမဲ့ပေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး GPL လိုင်စင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပွင့်လင်းရင်းမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည်။ Skrooge ကို KDE တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး တခြား ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုပရိုဂရမ်တွေနဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဒေတာတွေကို import/export လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
sudo apt - get install skrooge
Moneydance (http://moneydance.com/) ဟာ ကဲ့သို့ စီးပွားဖြစ်ရောင်းချတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Java အား အခြေပြု ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး Operation System အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါသည်။ အသုံးချခွင့်လိုင်စင်အတွက် တစ်ခုချင်းကို ဒေါ်လာ ၅၀ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါသည်။
ှSQL - Ledger (Enterprise Fianance Management)
SQL - Ledger ERP (http://www.sql-ledger.org/) က double-accounting စနစ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Operation System မရွေးတဲ့ ၊ အခမဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ ပွင့်လင်းရင်းမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပြီး SQL database server (PostgreSQL/Oracle/Mysql databases) တွေကို အသုံးပြုကာ inventory ,work and purchase orders,taxes ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းအချက်အလက်တွေကို ခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ၀ဘ်ဘရောက်ဇာ (Internet exploer ,Mozilla Fox ) ကနေတစ်ဆင့် အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါသည်။ ကို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဘာသာစကားအများစုကိုလဲ အထောက်အပံ့ပေးထားပါသည်။
sudo apt - get install sql-ledger
မပြင်ဆင်ရသေးပါ။ မကြာမှီ ပြင်ဆင်မည်။
software allows an organization to haveamanual that can be edited byanumber of collaborators.Wikipedia is the best known example.
Media Wiki (http://www.mediawiki.org) is the free. မကြာမီပြင်ဆင်ဖြည့်စွတ်မည်။
Twiki (http://twiki.org)is an open source wiki engin used by many small to medium size companies internally. မကြာမှီပြင်ဆင်ဖြည့်စွတ်မည်။
sudo apt- get install twiki
Moin Moin (http:moin moin.in)is free ,open source (GPL-Licensed) wiki မကြမှီပြင်ဆင် ဖြည့်စွတ်မည်။
Tiddly Wiki (http://www.tiddlywiki.com/)is an open source personal wiki. မကြာမှီပြင်ဆင် ဖြည့်စွတ်မည်။
Drupal (http://drupal.org/)သည် website များဖန်တီးခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုနေကြသည့်tool များထဲတွင် ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေသည့် open-source တစ်ခုဖြစ်သည်။ရိုးရှင်းသော
website များမှသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသော website များအထိ အချိန်အနည်းငယ်ပေးလေ့လာရုံဖြင့်
ဖန်တီးရေးဆွဲနိုင်သည့် module အခြေပြု wetside ဖန်တီးသည့် toolဖြစ်သည်။ စတင်သုံးစွဲနည်းတွင် သတင်းအချက်အလက်များ စုံစုံလင်လင် ရာယူနိုင်ပါသည်။ Drupal အသုံးပြုရန်အတွက် LAMP server အား (Install မလုပ်ရသေးပါက Install ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး Drupal နှင့် တပါတည်း Install ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Drupal ကို MySQL database (LAMP ရှိ M) နှင့်အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပြီး PostgreSQL( Install ပြုလုပ်ထားပါက ) နှင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Drupal 17 ၏ Debian package အား  (https://packages.debian.org/sid/all/drupal7/ ဤနေရာတွင်) ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့် system (32 bit သို့မဟုတ် 64 bit) အတွက် package အား download ပြုလုပ်ကာ package အား Synaptic သို့မဟုတ် Kpackage Kit စသည့် package manager များ အသုံးပြုပြီး Install ပြုလုပ်နိုင်သည်။ (K) Ubuntu OS အသစ်တွင် တိုက်ရိုက် Install ပြုလုပ်နိုင်ရုံသာမက Debian respository ကိုပါ (Download page တွင် ဖော်ပြထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ) ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး Install ပြုလုပ်နိုင်သည်။
-Drupal6 မှ Drupal7 သို့ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဤလမ်းညွှန်ချက် (http://drupal.org/node/570162) များအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Drupal6 (Web content publishing)
Drupal6 အား package အဖြစ်ရယူနိုင်ပြီး command - line terminal မှ လည်းရရှိနိုင်သည်။၏
sudo apt - get install drupal6
install ပြုလုပ်ပြီးပါက (ဖြစ်လာနိုင်သည့် ပြသနာအနည်းငယ်အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် ) apache2 server အား restart ပြုလုပ်ပါ။
သင့် browser မှတစ်ဆင့် installation အား အပြီးသတ်ပေးပါ။
Install ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် သင့် browser မှ တစ်ဆင့် ဤ installation tips များအားဖတ်ရှုပါ။ ပြီးနောက် Durpal site building tip များအား ကြည့်ရှုပါ။ Drupal /Ubuntu အသုံးပြုသည့် Group အား Drubuntu တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
libgd 2- xpm
When I installed my Ubuntu server, it installed libgd 2-noxpm (http://package.ubuntu.com/jaunty/libgd2-noxpm). This isagraphics library (without X pixmap (XPM) (http://en.wikipedia.org/wiki/X_PixMap) or font configuration (fontconfig) support). However, Drupal requires libgd2-xpm.(http://packages.ubuntu.com/jaunty/libgd2- xpm),which is used instead of libgd2-Xpm.Removing libgd 2-xpm doesn't appear to be trivial, however.I could not remove it using apt,Adept,or KPackageKit.
However, Synaptic Package Manager does appear to remove libgd2-noxpm successfully,and then libgd2-xpm can be installed.---
Exim(http://www.exim.org/) နှင့် Postfix (http://www.postfix.org/) တို့သည် mail ထိန်းချုပ်သည့် software များဖြစ်ပါသည်။ Drupal6 သည် Exim ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် Postifix အား install ပြုလုပ်ထားပါက ဖြုတ်ပစ်ပြီး Exim ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် Postfix ကို အသုံးပြုထားသော mail server တွင် Drupal6 အား အသုံးမပြုပါက ပိုကောင်းပါသည်။
WordPress (http://wordpress.org/) သည် အစပိုင်းတွင် Blog ရေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် tool အဖြစ်မှ နောက်ပိုင်းတွင် online စာပေရေးသားထုတ်ပြန်ရာတွင် လိုအပ်သည့် လိုအပ်ချက်များကိုပါ ပေါင်းစပ်ပေးထားသော လူကြိုက်များသည့် open source web content manager တစ်ခုဖြစ်သည်။ Blogger များနှင့် website အသေးစားမှ အလယ်အလတ် အရွယ်အစားများအတွက် Wordpress မှ မြန်နှုန်းမြင့် install ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် module များဖြင့် တန်ဆာဆင်ခြင်းများအား ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ Wordpress အတွက် LAMP server အား ဦးစွာ install ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် install လုပ်ရန်
sudo apt - get install wordpress
-Wordpress နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရန်အတွက် သင့် Apache2 ၏ www folder မှ install ပြုလုပ်မည့် folder သို့ သင်္ကေတ link ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး Localhost အမည်ဖြင့် MySQL database အသစ်ဆောက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
sudo in -s /usr/share/wordpress/var/www/wordpress sudo bash/usr/share/doc/wordpress/examples/set up-mysql -n wordpress local host
-မှတ်ချက်။ အကယ်၍ Wordpress အတွက် သင့် (virtual )host URL အမည်ကို သိပြီးသားဆိုပါက localhost အစား သင့် (virtual)host URL အမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။
ဥပမာ သင့် URL သည် mysite_x.homeserve.org ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ ။သင်ရေးရမည့် command သည် sudo bash/usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql-n wordpress mysite_x.homeserve.org
-အကယ်၍ virtual host တစ်ခုမှ သင့် Wordpress server အားချိတ်ဆက်လိုပါက /etc/apache 2/site- available folder တွင် သင့် virtual host အတွက် configuration ဖိုင်တစ်ခု ဖန်တီးပါ။ ဖိုင်အား ဖန်တီးတည်းဖြတ်ပြီးပါက ထိုဖိုင်မှ /etc/apache 2/sites-enabled folder သို့ သင်္ကေတ link ပြုလုပ်ပေးပါ။ Apache2အား restart ပြုလုပ်ပါ။
sudo/etc/init.d/apache2restart
Browser မှ တဆင့် Wordpress အား Install ပြုလုပ်ပါ။
သို့မဟုတ် သင့် virtual host မှ တဆင့် install ပြုလုပ်ပါ။
-မှတ်ချက်။ Jaunty expositories တွင် version 2.7.1 ပါရှိပြီး Security Worm အဖြစ်သတ်မှတ် ခံထားရပါမည်။ အကယ်၍ ထို version အား install ပြုလုပ်ထားပါက Tools - Upgrade menu မှ လက်ရှိ version သို့ ချက်ချင်း Update ပြုလုပ်ပေးပါ။ (သို့မဟုတ် website မှတဆင့် လက်ရှိ version အား install ပြုလုပ်ပါ)
အလိုအလျောက် update ပြုလုပ်လိုပါက Wordpress ၏ files များနှင့် Subfolder များကို www- data(apache2လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပိုင်ဆိုင်သည်) မှ update ပြုလုပ်ရန် ပိုင်ဆိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
sudo chown-R www-data/usr/share/wordpress
Joomla (http://www.joomla.org/) သည် website များ ပြုလုပ်ရာတွင် ရိုးရှင်းသည့် ပုံစံများမှ ရှုပ်ထွေးသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်များအထိ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအားမြင့် open source tool ဖြစ်သည်။ စတင်အသုံးပြုရန် info for beginners (http://docs.joomla.org/Beginners) ကို ကြည့်ရှုသင့်သည်။
Scribus(http://www.scribus.net/) သည် desktop publishing အတွက် professional တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော open-source package တစ်ခုဖြစ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt - get install scribus
Plone (https://plone.org/) သည် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ လုပ်ငန်းကြီးများတွင် အသုံးပြုနေသည့် content management system ဖြစ်ပြီး platform မျိုးစုံတွင် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သော open source (GPL - licensed ) system ဖြစ်သည်။ Installer ကို ဒီနေရာ (http://plone.org/products/plone) တွင် ရယူနိုင်သည်။ Python ကို ပြောင်းလဲထားသောကြောင့် အချို့အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Jaunty တွင် အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါသည်။
Gallery (Photo album website)
Gallery (http://gallery.menalto.com/) သည် PHP ကို အခြေပြုထားပြီး ဓာတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ်များအား website တွင် ပြသနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ Drupal အတွက် Gallery2Drupal interface အား ရရှိနိုင်ပါသည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
php BB (Forums) php BB (http://www.php BB.com/) သည် Forum များတည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုသည့် အခမဲ့ open source platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ LAMP server (သို့မဟုတ်) PostgreSQL database အား install ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်အတွက် universe repositories အား enable ပြုလုပ်ထားရန် အထူးလိုအပ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt - get install phpbb3
Moodle သည် အွန်လိုင်း သင်ကြားရေး cource များ hosting ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အခမဲ့ open source platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ Webinar software ဖြင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ LAMP server အား Install ပြုလုပ်ထားရန် (sudo tasksel install lamp-server) လိုအပ်သည်။ Moodle ၏ အခမဲ့ theme များအား ဤနေရာတွင် ရယူနိုင်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt - get moode
Moodle အတွက် Database server software (mysql-server-) ထည့်သွင်းလိုပါက ဖော်ပြပါ လမ်းညွှန်ချက်များအား လုပ်ဆောင်ပါ။ Moodle အား ထည့်သွင်းထားသည့် computer ပေါ်တွင် database အား တည်ဆောက်၍ localhost option အား acept လုပ်ပါ။ လိုအပ်ပါက Moodle configuration အား တည်းဖြတ်ပါ။
လိုအပ်ပါက Moodle apache2configuration file အား တည်းဖြတ်ပါ။
Browser မှတဆင့် install ပြုလုပ်ခြင်းအား အဆုံးသတ်ပါ။ (unattended install ပြုလုပ်ခြင်းမှာ ပိုသင့်တော်ပါသည်။)
စုံလင်စွာလေ့လာရန်အတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင် ကြည့်ရှုပါ။
Claroline (http://www.claroline.net/) သည် e-learning course များ hosting ပြုလုပ်ရန်နှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အွန်လိုင်းတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ထားသည့် အခမဲ့ open-source platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်အတွက် LAMP server အား install ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ installation အတွက် source file အား ၎င်း website တွင်ရယူနိုင်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်များအား ဤနေရာတွင် (http://www.claroline.net/documentation/tutorials.html) တွေ့နိုင်သည်။
Dokeos (http://www.dokeos.com/) သည် အခမဲ့ သင်ကြားရေး platform တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆေးပညာဆိုင်ရာ ပုံများ၊ case presentation များပါ ပါဝင်သည်။ ဥရောပတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေကြပါသည်။
ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်။ you can contribute.
Kompozer (http://kompozer.net/) isaGecko (http://en.wikipedia.org/wiki/Gecko_(Layout_engine))
sudo apt - get install kompozer
Quanta Plus (Web IDE )
sudo apt - get install quanta kompare kxsldbg cervisia
Netbeans (http://www.netbeans.org/features/) isafree open-source
sudo apt - get install bluefish
Gobby ( Multi - user development)
Gobby ( http://gobby.0x539.de/trac/) isafree, multi - platform open source collaborative editor supporting multiple documents in one session andamulti - user chat. Install:
sudo apt - get install gobby
Eclipse (http://www.eclipse.org/home/newcomers.php) isafree open - source cross - platform integrated development environment with plug in support foralarge set of programming languages, e.g. Java,C/C++,Python ,PHP.
sudo apt - get install eclipse
Science, Technology ,and Engineering Applications
What ..you thought Ubuntu was just for pay? Also see Ubuntu Science (http://help.ubuntu.com/community/OtherSoftware) . မကြာမီ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မည်။
Arduino (http://www.arduino.cc/) is an open - source electronics prototyping platform based on flexible, easy - to -use hardware and software. It's intended for artists, designer ,and bobbyists interested in creating interactive objects or environments.See this tutotial (http://www.codetorment.com/2009/11/02/tutorial - getting - started -with -arduino -ide -on- linux- ubuntu - 9- 10/)
La TeX (http://www.latex.project.org/) isaLaTeX isafree high- quality typesetting sytstem for the production of technical and scientific documention.
LyX (http://www.lyx.org/) isaWYSIWYG frontend and GUI interface useful in creating documents formatted for La TeX. Install:
sudo apt - get install Lyx
La TeX Reference Managers
-The standard La TeX bibliography (Bib TeX) tool can be manipulated with one of several tools:
sudo apt - get install nbibtex
sudo apt - get install jabref
sudo apt - get install biblatex
-kbibtex (for KDE) .Install:
sudo apt - get install kbibtex
-Zotero (http://www.zotero.org) isaFirefox plugin that allows culling references (and reference content ) from online references.
Utilities facilitate everyday tasks, such as keeping the clock up to date, archiving utilities , and more.
The command - line terminal utility ZIP (http://linux.die.net/man/1/zip) creates files that are compatible with the time - honored PKZIP and WinZip. It is included in (K) Ubuntu by default. Extracting zip files can be done with unzip utility.using the -P option allows usingapassword for the files.
zip - r - p mypassword desination.zip
Notes: The -r option indicates to include all subdirectories recursively.
FileRoller (Archiving GUI)
FileRoller (http://fileroller.sourceforge.net/features.html) isaGUI for many types of archival utilities.
X-archiver (Archiving GUI)
Xarchiver (http://xarchiver.sourceforge.net/) isaGTK - based GUI front -end for many archiving utilities. Install:
sudo apt - get install xarchiver
sudo apt - get install rar
Unrar extracts files archived with the proprietary .rar format. A free version can be installed:
sudo apt - get install unrar-free
or the proprietary version (also free for noncommercial use) can be installed with the ubuntu- restricted-extras package or with:
sudo apt - get install unrar
The open - source 7-Zip archive format was originally designed for Windows (and DOS) but is also available for Ubuntu. The GNU/Linux version of 7-Zip does not come withaGUI, but Ark can hook into 7-Zip to handle 7z archives.Install:
sudo apt - get install p7zip - full
To allow the 7-Zip extension for Ark to extract .rar files ,also install:
sudo apt - get install p7zip-rar
K Disk Free (Hard drive properties monitor)
K Disk Free (http://docs.kde.org/stable/en/kdeutils/kdf/using-kdf.html) isaKDE utility for monitoring free disk space,etc.
sudo apt - get install kdf
A screensaver is useful asasecurity precaution as well asapower and screen element saver. Using evenasimple Blank Screen screensaver withapassword can slowapotentially malicious passerby from gaining access to your keyboard and computer while you are away from your desk.
Menu - System - Preferences - Screen Saver
-Setasecurity password:
Screen Saver - Lock screen when screensaver is active (ticked)
Also see these tips for partitioning scheme suggetions, other partitioning tools and methods, and usage of multiple partitions for multiple OSs.
G Parted Partition Manager
Gparted (http://gparted.sourceforge.net/) သည် Hard Drive Partitions ခွဲရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော GTK
(Gnome) အခြေပြု ဆော့လ်ဝဲ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ KDE တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
-ဤဆော့လ်ဝဲကို LiveCD ပေါ်မှ အသုံးပြုပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းထွက်ရှိသော Ubuntu LiveCD များတွင် GParted ဆော့လ်ဝဲကို ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ Ubuntu ကို စက်ထဲတွင် Install မလုပ်ဘဲ၊ CD မှ တိုက်ရိုက် အသုံးပြုပြီး GParted ကို စတင်နိုင်ပါသည်။]
-အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကား GParted .iso ဖိုင်ကို ဤနေရာမှ (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group _id=115843 package_id=271779) ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို .iso ဖိုင်ကို GPartet LiveCD ပြုလုပ်ရန် ဤ CD Burning Guide (http://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto) ကို ဖတ်ပါ။ G Parted LiveCD ကို အသုံးပြုပြီး partitions ခွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
-Ubuntu ကို Hard Drive အတွင်း Install လုပ်ထားပါက Terminal တွင် အောက်ပါ Command ကို ရိုက်ထည့်ပြီး GParted ကို Install လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
System Rescue and Cloning Utilities
SystemRescueCD (http://www.sysresccd.org/Main_Page) isaLiveCD that includes important utilities such as GParted,Partimage,ddrescue, Rsync , and FSArchiver. Several of these utilities cannot be used from withinarunning partition, so using them fromaLiveCD is often necessary. Download (http://www.sysresccd.org/Download) and burn (http://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto) the LiveCD from the website.
Clonezilla (http://clonezilla.org/)allows the backup or duplication ofapartition forasingle machine or for multiple machines overanetwork. (It is similar to North Ghost.)It includes Partimage, partclone (http://sourceforge.net/projects/partclone/),and other utilities.It is available (http://sourceforget.net/projects/clonezilla/files) asaLiveCD which can then be burned (https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto).(A serious limitation of Clonezilla is its inability to backup/restore split image files to/from multiple media (e.g.spanned DVDs/CDs), limiting its usefulness as an inexpensive cloning and distribution solution.Partition image backup/restoration must be to/fromasingle hard drive,large capacity USB stick,or networked storage space)
Disk Imaging software G4U (http://sourceforge.net/projects/g4u/)isautility to imageadisk bit by bit. G4L (http://sourceforge.net/projects/g4l/) isautility to imageadisk bit by bit.It inkcludesaGUI interface.
Ubuntu Customization Kit (http://sourceforge.net/projects/uck)isautility to customizea(K) Ubuntu LiveCD.Install: sudo apt-get install uck
Remastering software Debian and (K) Ubuntu Linux operating systems can be remastered and customized (using one of
a number off utilities) for re-distribution.(See thisWikipedia list
(http://en.wikipedia.org/wiki/List-of-rematering for distribution among its members,while preserving the intrinsic architecture and function of (K)Ubuntu.The customized (K) Ubuntu OS can than be distributed onaCD oraUSB flashdrive. Users are then free to futher customize the OS,or even to revent back to the original default(K) settings. Also see the Ubuntu wiki (http://help.ubuntu.com/community/Install CDCustomization).
sudo apt-get install oem-comfig-gtk
!---[http://sourceforge.net/projects/remastersys/Remastersys for Ubuntu (http://www.geekconneection.org/remastersys/ubuntu.html---) .For tips, see this page. Reconstructor(https://www.reconstructor.org/projects/reconstuctor/wiki/UserGuide). The open source engine can be downloaded (https://www.reconstructor.org/projects/reconstutor/files)and installed a.deb package.
.For tips,see this page.
Run Ubuntu LiveCD fromaUSB pendrive
The Ubuntu LiveCD can be installed on and run fromaUSB pendrive. Settings ca be persistently saved (but the LiveCD kerned modules can not be upgraded). Programs can be installed and run,however ,and files saved to the USB drive. (The installed programs will remain installed). An Ubuntu Live CD is needed to do the installation. For additional info, see the Ubuntu Community documentation (http://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSB Stick) or the Pendrivelinux instructions (http://www.pendrivelinux.com/creating-an-ubuntu-live-usb-from-cd/).
The USB LiveCD can be used to install Ubuntu on computers (including netbooks) that do not have CD-ROM/DBD drives.
USB pendrives to be used to run Ubuntu should haveaminimum of2Gb(preferably4Gb).If you wish to installafast, fully functional Linux system onapendrive that has less memory than that, use PuppyLinux (http://www.puppylinux.org/) or Lubuntu (https://wiki.ubuntu.com/Lubuntu).
You can makeaLiveCD onaUSB pendrive using USB Creator and eitheraLiveCD or an .iso version of the LiveCD stored on your hard drive. USB Creator is installed by default in Ubuntu. If not,install:
sudo apt - get install usb -creator-gtk
Menu - System - Startup Disk Creator
Many computers do not allow booting fromaUSB drive (but they do allow booting from the CD-ROM). You can createaCD-ROM using these Pendrivelinux instrctions (http://www.pendrivelinux.com/make-a-usb-boot-cd-for-ubuntu-9-10/) and set your BIOS to boot from this CD-ROM. When you boot from this CD-ROOM, it will use the bootup files on the Ubuntu USB drive you previously created (in the step above).
GRUB boot manager settings
Ubuntu 11.04 (Natty) တွင် boot manager အဖြစ် (customize လုပ်ရန် ရှုပ်ထွေးသော) Grub2 (http://www.gnu.org/software/grub/maunal/grub.html) ပါလာပါသည်။ (Grub2 နှင့် grub-pc သည် တစ်မျိုးတည်းသာ ဖြစ်သည်။) Grub2 အတွက် ညွှန်ကြားချက်များကို Ubuntu wiki (http://wiki.ubuntu.com/Grub2) သို့မဟုတ် Ubuntu forums (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275) များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အကြမ်းအားဖြင့်
sudo nano /etc /default /grub sudo grub-mkconfig--output=/boot/grub/grub.cfg
အခြားသောနည်းလမ်းအနေဖြင့် အောက်ပါ command ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Turn off ACPI through GRUB
The new Linux kernel , starting with Karmic ,will attempt to throttle the CPU every few seconds based on lm-sensors read of CPU temperature and fan speed. If your hardward is not supported by lm-sensors (like mine), this will cause your system to show down dramatically or even freeze. As always, this is an ACPI problems, so disabling it at boot often takes of the problem.Edit the GRUB configuration as above and add the line:
GRUB _ CMDLINE _ LINUX =acpi=off
Grub2 background image,colors,fonts
-Grub2 အတွက် နောက်ခံပုံရိပ်များ၊ အရောင်များ ၊ Font်များ ဤနေရာတွင်
(့http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=10720685#post 10720685) ကြည့်ပါ။
-Grub2 တွင် မည်သည့် နောက်ခံပုံကို သုံးသည်ဖြစ်စေ အသုံးပြုမည့်ပုံကို /boot/grub ဖိုင်တွဲတွင် ထည့်၍
Grub2 ကို configure လုပ်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အသုံးပြုမည့်ပုံသည် /etc /default /grub တွင် ရှိသည့် Grub2စတင်လုပ်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော ပုံအရည်အသွေးနှင့် တူညီရမည်။ (ဥပမာ 1024 x 768)
-ရွေးချယ်ထားသော splashimage များကို /usr/share/image/grub ဖိုင်တွဲတွင် ထည့်သွင်း၍
sudo apt - get install grub2-splashimages
-အသုံးပြုလိုသော ပုံရိပ်တစ်ခုကို /boot/grub ဖိုင်တွဲတွင် ထည့်၍ splashimage အနေဖြင့်
sudo in -s /usr /share /images /grub /Plasma-lamp.tga/boot/grub sudo update-grub
Protecting Grub2 from cracking
Grub2အား ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုနိုင်ရန် ကာကွယ်ခြင်း
-Grub2 ကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော အချက်များကို Grub Manual
(http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Security ) တွင် ကြည့်ပါ။
-စကားဝှက်ထည့်သွင်းရန်အတွက် /etc/grut.d/40_custom configuration file တွင် အောက်ပါ
command ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
set superusers=user1 #password_pbkdf2 user1 grub.pbkdf2.sha512.10000.biglongstring password user1 insecurecleartextpassword
စကားဝှက်နေရာတွင် insecurecleartextpassword အစား သင်၏ စကားဝှက် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရပါမည်။ သို့မဟုတ် ဤနေရာ (http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Security) တွင် ပြထားသော pbkdf2-encrypted နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ကာကွယ်နိုင်သည်။ သင်၏ Ubuntu OS Grub2 လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကို ဤ Blog (http://www.panoet.com/set-grub-2-password- protection-149) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
Boot partition တစ်ခုနှင့် အသုံးပြုရန် GRUB ၏ version အဟောင်းဖြစ်သည့် (Grub Legacy (http://www.gnu.org/software/grub/manual/legacy/grub.html) ကို ရယူနိုင်သည်။ Grub Legacy ကို ထည့်သွင်းရန်အတွက်
sudo apt - get install grub
-အကယ်၍ သင့်ကွန်ပျူတာတွင် operation system တစ်ခုထပ်ပိုရှိနေပါက multiple operation systems
(OS) ဖြစ်နေပြီး သင်သည် Grub Legacy boot manager ကို သုံးစွဲဖူးပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Grub Legacy ၏ option များကို menu.1st configuration file တွင် တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
sudo nano /boot /grub /menu.1st
(text editor အဖြစ် nano အစား gedit ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။)
Chainloading Grub2 from Grub Legacy
Grub Legacy မှ data များ ရယူ၍ Grub2 တွင် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း
Grub Legacy မှ data များရယူ၍ Grub2 တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် Grub Legacy ၏ menu.1st configuration file တွင် ဤပုံစံဖြင့် မိမိ OS များကို ဖြည့်သွင်းပါ။ (menu.1st ဖိုင်ကို boot partition တွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။)
title Kubuntu Maverisk OS (chainloader) rootnoverity (hdo,6) kernel /boot /grub /core.img
title Kubuntu Maverick OS (chainloader) rootnoverify (hdo,6) configfile/boot/grub.cfg
--- t Protecting Grub Legacy From cracking
Grub Legacy ကိုချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုနိုင်ရန် ကာကွယ်ခြင်း
-Grub Legacy ကိုကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသောအချက်များကို this section of the Grub Manual
(http://www.gnu.org/software/grub/manual/legacy/grub.htm#Security) တွင် ကြည့်ပါ။
-စကားဝှက်ထည့်သွင်း ကာကွယ်ရန်အတွက် /boot/grub/menu.1st configuration file တွင် အောက်ပါ
command line ကို uncomment လုပ်ပါ (hash သင်္ကေတကို ဖယ်ထုတ်ပါ။)
ထို့နောက် စကားဝှက်ထည့်သွင်း၍ သို့မဟုတ် ဤနေရာ (http://www.gnu.org/software/grub/manual/legacy/grub.html1#Security ) တွင် ပြထားသော md5- encrypted နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ကာကွယ်နိုင်သည်။ menu item များကို စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ရန် မည်သည့် item menu ၏ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်မဆို ကာကွယ်ထားကြောင်း အမှတ်အသားဖြစ်သည့် lock ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Ubuntu ၏ ယခင် version များတွင် သင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့် program အား ပုံသေအသုံးပြုမည်ကို သင့်အနေဖြင့် ဤနေရာမှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Menu - System - Administration - Default Applications
(သို့မဟုတ်) ဖိုင်တစ်ခုအား right click နှိပ်၍ Open with Other Application .. ဖြင့်လည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Default Application munu သည် လက်ရှိ Ubuntu version တွင် မပါရှိတော့ပါ။ သို့သော် ဤ function အား ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသော GUI နှင့် Ubuntu နှင့် Multiple similar Ubuntu system twesk များအတွက် Ubuntu Tweak (http://ubuntu-tweak.com/) ကို install ပြုလုပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
wget nowikihttp://launchpad.net/ubuntu-tweak/0.5.x/0.5.8/+ download/ubuntu-tweak_0.5.8-1all.deb sudo dpkg -i ubuntu- tweak _ 0.5.8-1_all.deb/nowiki Killaprocess Sometimesaprogram (or process) just freezes. To kill (or end) the program/process:
Menu- System- Administration- System Monitor- highlight the errant process- Kill
process From the command line: sudo killall process
where process is the name of the frozen program,such as firebox.
တစ်ခါတစ်ရံမှာ Program တစ်ခု (သို့မဟုတ်) process တစ်ခုဟာ အသုံးပြုနေစဉ်မှာပဲ ရပ်တန့် (hang) သွားတတ်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သော program (သို့မဟုတ်) process များအား kill (သို့မဟုတ်) ပိတ်ပစ်ရန်အတွက်
Menu- System- Administration- System Monitor- highlight the errant process -Kill
မှပိတ်နိုင်ပါတယ်။ command line မှလည်း sudo killall process ဟုရိုက်ကာ ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ process နေရာတွင် ရပ်တန့်နေသော program ( firefox ဆိုပါက firefox) ဟုထည့်ပေးရပါမယ်။
Menu - System -Administration -Keyboard Mouse - Keyboard - turn on Numlock on Startup
သင့်အနေဖြင့် encrypted ပြုလုပ်ထားသည့် အရာများပါဝင်သော folder တစ်ခု ဤလမ်းညွှန်ချက်များ (http://help.ubuntu.com/community/EncryptedPrivatedDirectory) အား ကြည့်ရှု၍ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
Createasymlink fromafile to another location
symbolic link (http://en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_link) (သို့) symlink ဟုလည်း သိကြသည့် သင်္ကေတလင့်သည် Linux ၏ file သို့မဟုတ် directory တစ်ခုအား တစ်နေရာမှ အခြားနေရာသို့ ညွှန်ပြသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုပုံ
Ln -s /path /to /source/path/to/destination
အကယ်၍ /path/to/destination မှ superuser ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါက အောက်ပါ command အား အသုံးပြုပါ။
sudo Ln-s /path /to/source /path/to/destination
ဤနည်းသည် ယခင် window user များ အကျွမ်းတ၀င်ရှိကြမည့် Shoutcut များဖန်တီးသည့် ပုံစံဖြင့် ဆင်တူသော်လည်း ပို၍ အဆင့်မြင့် (စွမ်းအားမြင့်) ပါသည်။
Root သို့ တိုက်ရိုက် log in ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် root password ထည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ password ထည့်သွင်းရန်အတွက်
sudo passwd rood
ကို အသုံးပြု၍ root သို့သွားပါ။ ထို့နောက် root password အား ထည့်သွင်းပေးပါ။
Getaroot prompt without usingaroot password
If you have not setaroot password (or don't konw it), you can obtain root user privileges anyway. From the command -line Terminal:
You will use your own user password instead ofaroot password. You could also getaprompt to become any other user on the computer by typing:
Use the File Managers as root
Maunally Mount and Unmountadevice
To manually mountadevice:
replace /dev/hda/with the location of the device.
To manually unmountadevice.
replace/dev/hda with the location of the device.
တစ်ခုတည်းသော Network manager အား GUI interface ဖြင့် စတင်လုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါသည်။ Network- Manager သည် ပုံမှန်အနေဖြင့် ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အသုံးပြုသူများသည် Wicd Network Manager (http://wicd.sourceforge.net/) ကို ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။
Network Manager သည် ubuntu တွင် ပုံမှန်အနေဖြင့် ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Notification နေရာတွင် internet connections (wireless APs သို့မဟုတ် wired connection တို့ကို )ချိတ်ဆက်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးမပြုရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Wicd Network Manager (http://wicd.sourceforget.net/) isaGTK -dependent networking manager written in Python that can be used in all variants of Ubuntu. Many users (including me) report it to be faster and more stable than Network Manager. To avoid networking conflicts, Wicd requires the removal of Network Manager prior to installation.
sudo apt - get remove network - manager sudo reboot sudo apt - get install wicd
I have never been able to ger Network Manager to accept my static IP address settings. If you only use onlyawire interface, you do not neekdanetwork manager and it can be removed.
-Remove Network Manager:
sudo apt - get remove network - manager sudo reboots
-Edit the /etc /network/interfaces files:
GPPP သည် ယခင် Ubuntu versions တွေရဲ့ default modem dailing application ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
Menu - Applications - Internet - GPPP Internet Dail - up
Remote Access နည်းလမ်းမျိုးစုံရှိပါသည်။ VNC Sharing ကို သုံးခြင်းဖြင့် ရီမုတ်လုပ်ထားသော ကွန်ပျူတာ၏ Desktop ကို ကြည့်နိုင်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ (Windows သုံးသူများသည် အလားတူ (remote desktop protocol,RDP ) ဟု ခေါ်သော သီးခြားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုပိုင် ပရိုတိုကောကို သုံးကြသည်။) XDMCP (X Display Manager Control Protocol) ဖြင့် လည်း X-windows ကို အခြေခံသည့် ပြီးပြည့်စုံသော Remote Login ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ခွင့်မပြုသင့်သော ၀င်ရောက်ခြင်းများ ၊ဒေတာအချက်အလက် ပို့ဆောင်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးသော သင့်တော်သည့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမရှိလျှင် Remote Connection သည် လုံခြုံရေးအရ အန္တရာယ်ရှိပေသည်။
Secure Shell သို့မဟုတ် SSH လို့ခေါ်သော network protocol တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း Protocol သည် ကွန်ပျူတာ နှစ်ခုကြားတွင် Secure channel (သို့မဟုတ် tunnel ) မှ တဆင့် အချက်အလက်တွေကို ဖလှယ်နိုင်ရန် အထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ Encryption လုပ်ခြင်းဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို တိကျလုံခြုံမှု ရှိစေပါတယ်။ OpenSSH client ကိုတော့ Ubuntu တွင် default အနေနဲ့ install လုပ်ထားပြီး အခြား SSH server run နေသော ကွန်ပျူတာတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Run Command အသုံးပြုခြင်း သင့်ရဲ့ စက်အတွင်းက Application များကို Run Command မှတဆင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Alt +2ကိုသုံးပါ။
Hot Keys များအား ပိတ်ခြင်း
ကျွန်တော့အမြင်မှာတော့ ဒါဟာ အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။။ အစက်လေးတစ်စက်ဟာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ဘယ်လို အဖြစ်အပျက်မျိုးကို မဆို ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်နဲ့ပဲ ဒါဟာ ပြသနာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ Operation System ထဲမှာ ရှိနေပြီး turn off လုပ်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။
Menu - System -Administration -Advanced - Input Actions -General Settings - check Disable KHotKeys daemon
Menu- System -Administration -Advanced- Input Actions - Gestures Settings - check Disable mouse gestures globally
တကယ်လို့သင်က Disable mouse gestures globally ကို ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ (တခါတရံမှာ အလုပ်မလုပ်ပါ) Desktop ပေါ်က မလိုအပ်တဲ့ Hotkey တွေကို disable လုပ်ပါ။
Menu - System - Administration -Advanced -Keyboard Mouse - Keyboard Shortcuts
ပြီးတော့ သင်က linking gestures to sticky and slow keys ကို deactivate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Menu - System -Administration -Accessibility -Activation Gestures -uncheck Use gestures for activating sticky keys and slow keys
မှတ်ချက်။ ။သင့်အနေနဲ့ application အတော်များများကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် hotkeys တွေကို disable လုပ်ထားရပါမယ်။
Synaptic Touchpad မှ hotkeys များကတော့ Ubuntu documentation
(https://help.ubuntu.com/community/Synaptics Touchpad#Ubuntu) ကို အသုံးပြုပြီး ရွေးချယ် turned off ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Associate default applications
သက်ဆိုင်ရာ application များအား အလိုအလျောက်ပွင့်ရန်
-Dvd player အလိုအလျောက်ပွင့်လာရန်အတွက် DVD playback လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ Menu - System - Administration - Advanced - File Associations - x - content - video - dvd - Applications Preferance order - Add... တွင် မိမိနှစ်သက်ရာ media player အား ရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းတွင် Blu - Ray နှင့် HD DVD အတွက် ဆင်တူသော ရွေးချယ်မှုဇယားရှိပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီအား ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးပါ။ -MPEG နှင့် အခြား ရုပ်သံ Format များအတွက် အလိုအလျောက် player များသတ်မှတ်ရန်
Menu - System -Administration - Advanced - File Associations - video -mpeg -
Applications Preference order - Add.... တွင် သင့်စိတ်ကြိုက် media player ကို ရွေးချယ်ပါ။ .wmv) x -ms -wmv, သို့မဟုတ် Microsoft ၏ WMV format) ,.flv (x-flv, သို့မဟုတ် Flash video ), quicktime စသည် ရုပ်သံဖိုင်ပေါင်းများစွာအတွက် လက်ခံဖွင့်နိုင်မည့် player အားရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ -Audacious မှတဆင့် .pls အသံ stream များကို သတ်မှတ်ပေးရန်အတွက် Audacious: Menu - System - Administration - Advanced -File Associatons - audio - x -scpls - Applications Preference order - Audacious အား အပေါ်ဆုံးသို့ ရွှေ့ပြောင်း၍ (သို့မဟုတ်) ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Filename Patterns Section ထဲတွင်တော့ * .pls ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။
user စကားဝှက်အသုံးပြုရန် မလိုပဲ ၀င်ရောက်သောစနစ်
-သွားရောက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် (မှတ်ချက် ၊ User အတွက် password လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ) Menu - System -System Settings -Login Manager -Convenience -Enable Auto -Login (အမှန်ချစ်) - Lock session (အမှန်ချစ်)
-Pre - select user: Specified :Choose primary user
-ဒါကို ပြုလုပ်ရင်တော့ screensaver ကို Password - Portected နဲ့တွဲပြီး လုပ်သင့်ပါတယ်။
Autostartaprogram at bootup
Program များအား bootup လုပ်စဉ် အလိုအလျောက်စတင်စေခြင်း
မည်သည့် program မဆို ~/.config/autostart folder သို့ program သင်္ကေတ လမ်းကြောင်း ဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် bootup ၌ စတင်စေလိုပါက သင်္ကေတလမ်းကြောင်း ဖန်တီးပေးရပါမည်။
sudo in -s /usr/bin/firefox ~/.config/autostart
Choose Bootup /Startup services
Bootup /Startup service များရွေးချယ်ခြင်း
ှSystem ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ တိုးတက်စေရန်အတွက် Startup ပြုလုပ်စဉ်တွင် မလိုအပ်သော/ အသုံးမပြုလိုသော service များ စတင်ခြင်းများ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရပါမည်။
-GTK အား အခြေပြုထားသော Bootup - Manager အား Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt - get install bum
-Bootup-Manager အား အသုံးပြုရန်
Menu - System - Bootup - Manager
Runascript fromamenu item
Menu item မှ Script အား အသုံးပြုခြင်း
(password စသည့် )တုံ့ပြန်မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်းများအား ဖြေဆိုရန် script တိုလေးများအား Menu item ထဲတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အောက်တွင် SSH Negotiation ပြုလုပ်စဉ် password ထည့်ပေးနိုင်သည့် ဥပမာအား ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ပထမဦးစွာ အသုံးဝင် expect (http://linux.die.net/man/1/expect) program အား install ပြုလုပ်ပါ။
sudo apt -get install expect
Menu item တွင် shortcut (သို့) command အသုံးပြုခြင်း
expect apt -c 'spawn ssh -1 sshuser -L 5900:127.0.0.1:5900 remoteserver.remotedomain .org -p 22;expect ဖြစ်ပါသည်။
ဤ password ဥပမာသည် ssh program မှ password လိုအပ်သောအခါ sshpassword ကို သွားစေပါသည်။ Expect သည် command-line terminal မှ စာလုံးအချို့ကိုစောင့်ဆိုင်း ရယူပြီး စာများပြန်ထုတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် Menu Iten ကို terminal တွင်သာ run စေရမည်ဖြစ်သည်။
SHC (Encrypt scripts)
SHC (http://www.datsi.fi.upm.es/~frosal/) သည် code နှင့် password စသည်များကို မမြင်အောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး ထို script များကို binary အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် ရိုးရှင်းသော script compiler တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုပုံများအား ဤနေရာတွင် (http://www.datsi.fi.upm.es/~frosal/sources/shc.html) ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Debian Etch respository ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် install ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
sudo add - apt - repository http://archive.debian.org/debian/etc main
ထို့နောက် shc package အား install ပြုလုပ်ပါ။
sudo apt - get install shc
Screenshot ပြုလုပ်ခြင်း ဤ Tutorial (http://tips.webdesign 10.com/how-to-take-a-screenshot-on- ubuntu-linux) တွင် ကြည့်ပါ။
Customize desktop to look like KDE
Desktop အား KDE ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲခြင်း
နောက်ဆုံးထွက် Ubuntu versionတွင် Gnome desktop အား ပြုပြင်၍ cleaner KDE desktop အဖြစ် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ (ပြုပြင်ခြင်းသည် အလွန် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျသဖြင့် ဤအပိုင်းသည် လမ်းညွှန်အဖြစ်သာ ဖော်ပြပေးထားသည်။ )
-Desktop Customization ပြုပြင်ခြင်းကို ကြည့်ပါ။
RunaKDE4desktop from Ubuntu
Ubuntu တွင် KDE4Desktop အသုံးပြုခြင်း
Kubuntu တွင် အလိုအလျောက်ပါပြီးဖြစ်သော KDE4 အခြေပြု Desktop အား Ubuntu တွင် install လုပ်နိုင်ပါသည်။
apt - get install kubuntu - desktop
KDE4 အား install လုပ်ရာတွင် အသုံးမလိုသော feature များပြားခြင်းနှင့် Module များအကြား လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်း ပြသနာများကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ Login ပြုလုပ်ရာ၌ KDE (Kubuntu) Desktop ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ Gnome (Ubuntu) Desktop ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း Desktop တစ်ခုချင်းစီမှ Modules ၂ခုသည် function တစ်ခုအား လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက အခက်အခဲ(ကွဲလွဲခြင်း)များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
RunaKDE3desktop from Ubuntu
KDE3Desktop အား Ubuntu တွင် အသုံးပြုခြင်း
သင့်အနေဖြင့် ယခင် Lucid (သို့မဟုတ်) မည်သည့် KDE3application မှ KDE3Desktop ကို Ubuntu တွင် install လုပ်နိုင်ပါသည်။
-ဖော်ပြပါ KDE3repositories အား ထည့်ပါ။
sudo add - apt - repository ppa:kde3 -maintainers
-KDE 3.5 desktop အား install လုပ်ပါ။
sudo apt - get update sudo apt - get install kubuntu - desktop -kde 3
-မည်သည့် KDE3application ကိုမဆို install ပြုလုပ်လိုပါက package အမည်တွင် -kde3ဟူသော
စာလုံးကို ထပ်ဖြည့်ပေးရပါမည်။ အချက်အလက် အပြည့်အစုံအတွက် Pearson Computing
(http://apt.pearsoncompution.net/) ကို ကြည့်ပါ။
Kill (end)aprocess
Process (application) အား ပိတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အဆုံးသတ်ခြင်း
-Frozen PC ကို ပြင်ဆင်ရန် နည်းလမ်းအတော်များများ ရှိပါသည်။ Alt + F2 ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် frozen Application ကို ပိတ်ရန် Killall ကို အသုံးပြုပါ။ ဥပမာ:
sudo killall amarok sudo killall firefox
-ထစ်နေသော Graphic နှင့် ဆိုင်သည့် application များကို ပိတ်ရန်အတွက် xkill utility ကို သုံးပါ။ Alt+F2 ကို နှိပ်ပါ။ xkill ဟု ရိုက်ပြီး run ကို နှိပ်ပါ။ သင်ပိတ်လိုသော application ပေါ်တွင် Mouse ၏ ၀ဲလက်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် သင်ပိတ်လိုသည့် application များကို ပိတ်နိုင်ပါသည်။
-အခြားနည်းအနေဖြင့် AltGr+SysRq+K (Right Alt +Print Screen + K) ကို နှိပ်ပါ။ ဒီနည်းက သင့်ကို log out ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီနည်းက အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ Ctrl + Alt + F1 ကိုနှိပ်ပြီး login လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ သင့် password ကို နှိပ်ပြီး run ပါ။
sudo killall gdm sudo startx
Veew hidden files
Hidden File များအား ကြည့်ရှုခြင်း Nautilus Manager မှာ ဒါလေးကို နှိပ်ပါ။
Mute notifications (alerts)
Notification (အချက်ပြခြင်း ) တွေကို အသံဖျောက်ရန်
-အချက်ပေးသံတွေကို disable ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Menu - System - Preferences - Sound -Sound Effects - Sound theme: -No sounds - Close -GNOME အချက်ပေးချက်တွေဟာ အသံဖြင့် အလိုအလျောက် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါကို သီးခြား disable ပြုရပါမယ်။ Alt - F2 - gconf - editor -/apps/indicators - sound - volume _mute (အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ) -Login အချက်ပေး အသံကို ပိတ်ရန်အတွက် Menu - System -Preferences - Startup Applications - Startup Programs - GNOME Login Sound (အမှန် ခြစ်ဖြုတ်ပေးပါ။ ) - Close -Menu - System - Administration - Login Screen - Unlock - Play login sound (အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးပါ။) -Close
ကျပန်း password geneartor
-Pwgen သည် ကျပန်း password စာလုံးစုများထုတ်ပေးရန်အတွက် အသုံးဝင်သည့် command line တစ်ခုဖြစ်သည်။ Kubuntu တွင် Konsole မှ တဆင့် ၊Ubuntu တွင် Terminal မှတဆင့်
အသုံးပြုနိုင်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt - get install pwgen
-Pwgen အား အသုံးပြုရန်
-UUIDgen သည် ကျပန်း UUID များအား ထုတ်ပေးသည့် အသုံးဝင်သော အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းပေးထားသည့် program တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရန်း
ဆန္ဒရှိပါက ကျပန်း UUID အား password အနေဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Password checker and enforcement
John the Ripper (http://www.openwall.com/john/) Password စစ်ဆေးမှုနှင့် အတည်ပြုမှု
John the Ripper သည် Dictionary ၏ password များအား ဖျက်ရန်အတွက် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော open source ဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ၄သန်းခန့် ဘာသာပေါင်းစုံဖြင့် အသုံးပြုနေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤ program သည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် လွယ်လင့်တကူ ရနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ကွန်ပြူတာ နှင့် LAN ၏ password များအား စစ်ဆေးခြင်း၊ လုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ခြင်းများအတွက်လည်း ၏ အသုံးဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt - get install john
-Passwdqc (http://www.openwall.com/passwdqc/) သည် password များ၏ ကြံ့ခိုင်မှုအား အတည်ပြုပေးရန်အတွက် သုံးသော module တစ်ခုဖြစ်သည်။ Install ပြုလုပ်ရန်
sudo apt - get install passwdqc
File တစ်ခု၏ MD5 sum များအား စစ်ဆေးရန်အတွက် သုံးသော command line တစ်ခုဖြစ်သည်။
Spaces ခံ၍ အမည်ပေးထားသော File များ
-Spaces ခံ၍ ရိုက်နှိပ်ထားသော File နှင့် Folder အမည်များအား မျက်တောင် အဖွင့် အပိတ်များ ( )များ ထည့်အသုံးပြုသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် This Dir အမည်ပေးထားသော directory တစ်ခု သို့မဟုတ် /home/This Dir အမည်ရှိ directory တစ်ခုအား ပြောင်းလဲချင်ပါက အောက်ပါ command အား အသုံးပြုရမည်။
cd This Dir
-တစ်နည်းအားဖြင့် backslash (/) ကို space နေရာမှာ အစားထိုးခြင်းဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ This Dir အမည်ပေးထားသော directory တစ်ခု သို့မဟုတ် /home/This Dir အမည်ရှိ directory တစ်ခုအား ပြောင်းလဲချင်ပါက
cd This /Dir
Alien (http://kitenet.net/~joey/code/alien/) သည် (Red Hat) .rpm packages များကို (Debian).deb packages များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသော ဖိုင်ပြောင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနည်းဟာ စိတ်ချရတဲ့နည်းမဟုတ်သလို ပြောင်းလိုက်တဲ့ package တွေရဲ့ function တွေကို သေချာပြန်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် စာကြောင်းတွေ ပြန်ပြောင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Source ကနေ (Debian).deb package ကို ပြောင်းပေးခြင်းက ပိုပြီးစိတ်ချရပါတယ်။ Alien software ရဲ့ maintainer တွေ ကိုယ်တိုင်ကိုက important package တွေကို ဖိုင်ပြောင်းတဲ့အခါ Alien ကို အသုံးမပြုစေချင်ကြပါဘူး။ Alien ကို version နံပါတ်တွေ ပြောင်းတာကနေ ထိန်းထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖော်ပြပါ command ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
alien - k rpm _file _name.rpm
rpm ကို .deb အဖြစ်ပြောင်းနည်း
alien -dpackage - name .rpm
rpm ကို .deb အဖြစ်ပြောင်းပြီး ရလာတဲ့ file ကို တစ်ခါတည်း install လုပ်ရန်
alien - i package - name .rpm
rpm ကို Debian အဖြစ်ပြောင်းရန်
sudo alien - k .rpm
Program အစတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် Error တက်ခြင်း
အကယ်၍ သင့်တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် Error တစ်ခုတက်လာပါက ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
sudo chown - R user /home/user
မှတ်ချက် ။ user ဆိုသော နေရာတွင် သင့် username အမှန်အား ထည့်ပေးပါ။ ဤ command သည် folder ၏ ပိုင်ရှင်အား ပြောင်းလဲပေးမည်ဖြစ်သည်။ -R အပါအ၀င် (recursively ) ကိုဆိုလိုပြီး folder အခွဲများပါ ပါဝင်ပါသည်။
CD - ROM Troubleshooting
CD - ROM Error အားဖြေရှင်းခြင်း
အကယ်၍ သင် CD burner အသုံးပြုပြီး burn နေ့စဉ်အတွင်းမှာ cdrecord has no permission to open the device ဆိုတဲ့ Error တက်လာပါက terminal ကို ဖွင့်ပြီး
sudo chmod 777 /dev /scd0 လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ /dev/scd0 နေရာတွင် သင့် device အားထည့်ပေးပါ။ မှတ်ချက်။ chmod 777 သည် folder အား လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အစုံပေးလိုက်သည့် universal option ဖြစ်သည်။ 777 ဆိုသော ဂဏန်းသည် ရေးခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း ၊လုပ်ဆောင်ခြင်း စသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် တုိ့ကို အသုံးပြုသူအား အပြည့်အ၀ ပေးလိုက်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။
............................................Pg 95 to 96
Register and then add your suggestions directly to the wiki.
e Book version of this guide
-See the Books Category (http://www.kubuntuguide.info/index.php/Category:Books) for
free Ubuntu EN PDF eBooks based on this help guide.
-ယခု Ubuntu Myanmar Wiki သည် ပထမဆုံး ထုတ်ဝေသော အဆင့်သာရှိသေးသဖြင့်
အမှားအယွင်းရှိနေနိုင်ပြီး လိုအပ်နေသော အပိုင်းများကျန်နေသေးပါသည်။ အချက်အလက်များကို Local Server တွင် ပြုပြင်လျက်ရှိပါသည်။ မကြာမီ RC2 ထပ်မံ ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး အကုန်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီး အကောင်းဆုံးအခြေအနေအထိ ကြိုးစားပြီးပါက PDF/LocalWiki တို့အပြင် စာအုပ်အနေဖြင့်ပင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- အကယ်၍ လက်ရှိ Wiki ကိုသာ မြန်မာဘာသာဖြင့် PDF ရရှိလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ရယူနိုင်သည်။ (Chrome/ Mozila):
UbuntuGuideBurmese (last edited 2016-04-28 05:14:43 by saintjohn769)